My Collections!!!: August 2011
MSG နှငျ့ Chinese Restaurant Syndrome
အခုအပတ် ကျွန်တော် ဆွေးနွေးမယ့် အကြောင်းကတော့ Chinese Restaurant Syndrome ဆိုတဲ့ ရောဂါ အကြောင်းပါ။ ဒီရောဂါတော့ ဟင်းခတ်အချိုမှုန်. (သို.) MSG (Monosodium Glutamate) အရမ်း စားရင် ရတတ်တဲ့ ရောဂါပါ။ ဘာလို.နာမည် ဆန်းဆန်း Chinese Restaurant Syndrome လို.ခေါ်လည်း ဆိုတော့ တရုတ် စားသောက်ဆိုင် တွေက MSG သုံးတာ များတော့ ဒီတရုတ်ဆိုင်တွေမှာ စားသောက်ပြီးရင် ၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ချို. တရုတ် အစားအစာတွေ စားပြီးရင် ဒီရောဂါရဲ. လက0x081ခဏာလေးတွေ ပေါ်လာတတ်လို.ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို. ဖြစ်ဖူးတဲ့ သူတွေ ရှိရင် ရှိမှာပါ။ တရုတ် အစားအစာတွေ ချည်းမှာပဲ MSG ပါတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ MSG ပါတဲ့ အစားအသောက် တွေက အများကြီးပါ။ ပြီးရင် အောက်မှာ MSG ပါတဲ့ အစား အသောက်တွေ အကြောင်း ဆက် ဆွေးနွေး တာပေါ့။ အခုတော့ ရောဂါ လက0x081ခဏာတွေ အကြောင်း အရင် ပြောပါမယ်။ ရောဂါ လက0x081ခဏာတွေက ခဏပဲ ဖြစ်တတ်ပြီး ပြီးရင် ဘာဆေး၊ ဘာကုသမှုမှမယူဘဲ ပြန်ပျောက် သွားတတ်ပါတယ် ၊ အသေးစား symptoms လေး တွေပေါ့။
ဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါရဲ. လက0x081ခဏာတွေကတော့· ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းကိုက်မယ်· ရင်ဘတ်နည်းနည်းအောင့်မယ်· ရင်ထဲမှာတစ်လှပ်လှပ်ဖြစ်လာမယ်· ချွေးစေးတွေပြန်လာမယ်· ပူထူပြီး မျက်နှာတွေရဲလာမယ်· ရင်ပူမယ်· သိသိသာသာရေငတ်လာမယ်· နှုံးပြီး နွမ်းနယ်လာမယ်။ ဒီရောဂါ လက0x081ခဏာတွေ ဖြစ်တဲ့အခါ ကြာတဲ့ အချိန်နဲ. ရောဂါ လက0x081ခဏာရဲ. အတိမ်အနက် ကတော့ စားလိုက်တဲ့ MSG အနည်းအများ ပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ရောဂါ လက0x081ခဏာ တွေဟာ MSG စားသုံးပြီး ၃၀-၆၀ မိနစ် အတွင်းမှာ ပြနိုင်ပြီး ဘာဆေးမှ မသောက်ဘဲ ၂ နာရီနဲ. ၃နာရီ အတွင်းမှာ ပြန်ပျောက် သွားနိုင်ပါတယ်။ ဗိုက်ထဲမှာ အစာမရှိတဲ့ အချိန်မှာ MSG များတဲ့ အစာစား လိုက်ရင် ပိုပြီး စုပ်ယူမှု လွယ်ကူစေပြီး သွေးထဲကို များများ ရောက်စေပါတယ် ၊ Chinese restaurant syndrome ရဲ. Symptoms တွေ အလွယ်တကူ ပြနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်၊ တခြား အစာတစ်ခုခု စားပြီးမှ MSG ပါတဲ့ အစာစားရင် MSG ကို ခန0x081ဓာကိုယ်က စုပ်ယူမှု နည်းစေတယ်လို. ဆိုပါတယ်။MSG ၀င်လာတဲ့ အခါ ကိုက်ခန0x081ဓာကိုယ်ရဲ. ဇီဝဖြစ်စဉ် တွေနဲ. အရေးအကြီးဆုံး ကိုယ်ခန0x081ဓာရဲ. အဖွဲ.အစည်း System ကြီးတွေ ဘယ်လို အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်။မှတ်ချက်။ ။ ဒီရောဂါလက0x081ခဏာတွေအားလုံးဖြစ်မယ်လို.မဆိုလိုပါ။ MSG ကိုအများကြီးနှစ်ရှည်လများစားမှသာ ဒီရောဂါ လက0x081ခဏာတွေထဲက တစ်ချို. ပဲဖြစ်မှာပါ။ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ.အခြေနေပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါသေးတယ်။
Brain and Nervous System (ဦးနှောက် နှင့်အာရုံကြောအဖွဲ.အစည်း) MSG ဟာ ကြာကြာသာမှီဝဲစားသုံးမယ်ဆိုရင် ဦးနှောက်ကအာရုံကြောတွေကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်စေပါတယ်။ MSG မှာပါဝင်တဲ့ Glutamate ကများများစားမိရင် ဦးနှောက်က (oligodendrocyte) လို.ခေါ်တဲ့ nerve cell ငယ် လေးတွေကို အရမ်းလှုံ.ဆော်ပေးပြီး ကြာရင် အဲဒီ nerve cell တွေကို သေတဲ့အထိ ဖြစ်စေပါတယ်။ အာရုံကြောတွေဟာ Myelin ဆိုတဲ့အလွှာအုပ်ထားမှ ရရှိလာတဲ့ ပြင်ပက လှုံ.ဆော်မှုတွေကို ဦးနှောက်ကို အမြန်သတင်းပေးပို. ပြီး တုံ.ပြန်မှုတစ်ခုခုလုပ်နိုင်မှာပါ။ ခုဏကသေသွားတဲ့ oligodendrocyte တွေက Myelin ကိုထုတ်လုပ်ပေးတာလေ။ အခု Myelin တွေမထုတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ nerve ရဲ. Conductance ကျတယ်လို.ပြောရမှာပေါ့။ ဒီအခါမှာလူတွေက ထုံထုံထိုင်းထိုင်းလေးလေးလံလံတွေဖြစ်ကုန်တာပဲ။ နားမှာရှိတဲ့ အကြားအာရုံ cell တွေလည်း Glutamate ရဲ. လှုံ.ဆော်မှုကို တော်တော်လေးခံရတဲ့အတွက် နားအူတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ တိရစ0x081ဆာန်တွေကို MSG နဲ.စမ်းသပ်တဲ့အခါ တိရစ0x081ဆာန်တွေရဲ.မျက်လုံးက မြင်လွှာ (retina) ဟာ MSG ကြောင့်ပျက်စီးတာတွေ.ရပါတယ်။ လူတွေမှာလည်းအလားတူပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Cardiovascular System (နှလုံး နှင့်သွေးကြော အဖွဲ.အစည်း)MSG က သွေးပေါင်ချိန် Blood Pressure ကိုတက်စေပါတယ်။ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်စေပြီး ခုန်နှုန်းမမှန်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးအောင့်ရောဂါ (Angina) နဲ. သွေးတိုးရောဂါအတွက် သုံးတဲ့ ဆေး (Calcium Channel Blocker) ရဲ. အာနိသင်ကို MSG ကကျစေတယ်လို.ဆိုပါတယ်။ Glutamate က သွေးကြောတွေရဲ.အရွယ်အစားကို ကျဉ်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက်က သွေးကြောတွေကိုပါ ကျဉ်းတဲ့အတွက် အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ ခေါင်းကိုက်တာကိုဖြစ်စေနိုင်တာပါ။
Respiratory System (အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအဖွဲ.အစည်း)တချို.သောလူတွေမှာ MSG ကြောင့်ပန်းနာရင်ကြပ် Asthma ရောဂါကို ယာယီပိုဆိုးစေတယ်လို. Johns Hopkins တက0x081ကသိုလ်ရဲ. သုတေသနပြုလုပ်ချက်အရသိရပါတယ်။
Digestive System(အစာခြေအဖွဲ.အစည်း)MSG ဟာ သည်းခြေရည် (bile) ဖြစ်ပေါ်တာကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ Bile ကစားလိုက်တဲ့အဆီ Fat တွေကို ချေဖျက်ပြီးအူတွေကနေ စုပ်ယူဖို.လုပ်ပေးပါတယ်။ သူမရှိတဲ့အခါကျတော့ အဆီတွေကိုမစုပ်ယူတော့ဘဲ ဒီအတိုင်း အူတွေကနေ အပြင်ကိုဝမ်းထဲကနေစွန်.ပစ်တဲ့အတွက် Fatty Diarrhoea (သို.) Steatorrhoea (၀မ်းထဲမှာအဆီတွေပါလာတဲ့ condition) ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Glutamate တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဆီးချိုရောဂါကိုပိုဆိုးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရောဂါ လက0x081ခဏာတွေ မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဆင်ခြင်မယ် ဘယ်လိုအစားအစာတွေကို ရွေးချယ်စားသုံးမယ် ဆိုတာကို ဆက်ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်။ MSG ပါတဲ့အစားအသောက်တွေကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် တစ်နေ.လုံးထိုင်ပြောတောင်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူး။ MSG ကအရသာထူးတော့ စားသောက်ဆိုင်တွေက များသောအားဖြင့် အကုန်သုံးကြတာချည်းပါပဲ။ Snack food တွေမှာလည်းပါတာချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် U.S. မှာ အမေရိကန် အစားအသောက်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ. FDA ရဲ.ညွှန်ကြားချက်အရ အစားအစာရဲ. Ingredient list မှာ MSG ပါဝင်ကြောင်းရေးရပါတယ်။ နည်းနည်းလေးပါတယ် ဆိုရင်တောင်ရေးရပါတယ်။ ဒါမှ အစားအစာ ၀ယ်ယူသူတွေက MSG ပါဝင်ကြောင်း သိပြီး ရှောင်သင့်ရင် ရှောင်လို.ရအောင်ပါ။ ဒါပေမယ့် Glutamate ရဲ. သဘာဝSource တွေဖြစ်တဲ့ Soy ၊ Soy Sauce(ပဲငံပြာရည်) ၊ နွားနို. ၊ ဂျုံ ၊ cheese တွေကိုတော့ MSG ပါဝင်ကြောင်း မရေးတော့ပါဘူး၊ ဥပမာ-MSG ကို တစ်ကယ်မထည့်ပဲ ကြော်ထားတဲ့ ထမင်းကြော်မှာ source ဖြစ်တဲ့ ပဲငံပြာရည် ထည့်ထားတယ်ဆိုရင် No MSG လို. Label တပ်နိုင်ပါတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် အခုနောက်ပိုင်း တရုတ်စားသောက်ဆိုင် တွေမှာ No MSG ဆိုပြီးရေးထားကြပြီလေ။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတို.က MSGရဲ. source တွေကိုသုံးနေတာပါပဲ။ အောက်ကပုံမှာ Glutamate ရဲ. Source တွေ နဲ. Glutamate များများပါတဲ့ အစားအစာတွေကို ပြထားပါတယ်။
MSG ကိုအသင့်စား အစားအသောက်တွေမှာ အများဆုံးထည့်သုံးကြတာတွေရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသားတွေ၊ အကင်တွေ၊ ကြက်အူချောင်း၊ ၀က်အူချောင်းတွေ၊ Dorito လိုမျိုး snack food တွေ၊ Mc Donald's, Burger King, KFC, Taco Bell စတဲ့ ဟမ်ဘာဂါ၊ ကြက်ကြော်ဆိုင်တွေက အစားအစာတစ်ချို. မှာ MSG ကိုသုံးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မြန်မာပြည်က ဆိုင်တွေမှာရောင်းတဲ့အစားအစာ အကုန်နီးပါး MSG ပါပါတယ်။ အာချီနိုမိုတိုအချိုမှုန်.လေ။ အဲဒါကို အရမ်းသုံးကြတာ။ လူတွေကလည်းကြိုက်ကြတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ ရှောင်တဲ့လူတွေရှိလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စားမှန်းမသိ စားနေကြတာပါပဲ။ korean တွေစားတဲ့ ကင်(မ်)ချီမှာ လည်း MSG ပါတယ်။ ဂျပန်တွေစားတဲ့ sushi က seaweed ကလည်း MSG ရဲ. Source ဖြစ်တယ်။ ပြောရရင် MSGမပါတဲ့ စားစရာဆိုတာ ရှိမှာတောင်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ တကယ်လို. MSG ရဲ.ဆိုးကျိုးတွေကိုကြောက်လို. ရှောင်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာတွေစားကြမလဲ။ ရှင်းပါတယ်။ အရည်ရွှမ်းတဲ့ သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေများများစားပေါ့၊ အသားဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် အိမ်မှာလှီးဖြတ်ပြီးချက်ပြုတ်စား၊ လုပ်ပြီးသား အသင့်ချက်ပြုတ်စား အစားအစာတွေကိုရှောင်နိုင်သမျှရှောင်။ နောက်ပြီးဒီစာဖတ်သူထဲမှာ Dorito ကြိုက်တဲ့သူရှိလား၊ ကြိုက်ပေမယ့် လျှော့စားသင့်တယ်။ တခြား fast food တွေရောပဲ လျှော့စားပါ၊ စေ့အဆံတွေ ဥပမာ- almond ဆိုရင်လည်း ဘာမှ အချို အငံ ထည့်မထားတဲ့ ဟာမျိုးကိုပဲစားပါ။ ဟင်းချိုတွေမှာ MSG ပါတတ်တာကို တွေ.ရတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ- အပြင်ကဝယ်စားတဲ့ မုန်.ဟင်းခါးဟင်းရည်ဆို MSG ကိုရှယ်ထည့်ထားတာ။ ဒါကြောင့် ဟင်းချိုဆိုရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ချက်သောက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒါကြောင့် ဘယ်အစားအစာမဆို သိပ်မဝယ်စား ပဲကိုယ့်ဟာကိုယ် အချိုမှုန်.မထည့်ပဲ ချက်စားကြပါလို.ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Chinese Restaurant Syndrome ဆိုတာလည်းမဖြစ်တော့ပဲ ကျန်းကျန်းမာမာနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။……….Ref;http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_restaurant_syndrome#Research_i...http://www.rawlifecoaching.com/?p=458
More about MSG (ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာမှ...)ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်းစားနေကြတဲ့ အချိုမှုန့်ခေါ် အန0x081တရာယ်မှုန့်အကြောင်း ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်းစားနေကြတဲ့ အချိုမှုန့်ခေါ် အန0x081တရာယ်မှုန့်အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ပြည်တွင်းက ဂျာနယ်စာမျက်နှာတွေ၊ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီနဲ့ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ (FDA) တို့ ပူးပေါင်းပြီး အကြော်လုပ်ငန်းတွေ အကြော်မျိုးစုံ ကြော်တဲ့ နေရာမှာ ရေသန့်ဘူးတွေ ဆီထဲ ထည့်ကြော်မကြော် လိုက်စစ်ပြီး ကြော်တာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရင် စည်ပင်သာယာဥပဒေနဲ့ရော FDA ဥပဒေနဲ့ပါ နှစ်မျိုး အရေးယူသွားမယ် လို့ ဖတ်လိုက်ရလို့ ၀မ်းသာမိပါတယ်။ဒါပေမယ့် မထင်ပါဘူးဗျာ။ရေသန့်ဘူးတွေဟာ ဓာတုနည်းနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပေါ်လီမာ ပလတ်စတစ် တွေဖြစ်လို့ ဒါတွေကို အပူချိန်မြင့်မားတဲ့ ဆီပူပူထဲမှာ ထည့်ကြော်မယ်ဆိုရင် ပလတ်စတစ်တွေထဲက Bisphenol-A (BPA) အပါအဝင် အဆိပ်ဒြပ်ပေါင်းများစွာ ထွက်လာပြီး အကြော်တွေထဲ စိမ့်ဝင်သွားပါတယ်။ ဒါတွေကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ စားမယ်ဆိုရင် လူသားတွေရဲ့ အာရုံကြောစနစ် နဲ့ မျိုးပွားစွမ်းရည်ကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နိုင်ပြီး ဆီးအိမ်ကင်ဆာ အပါအဝင် ကင်ဆာရောဂါ အမျိုးမျိုးကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီလို အန0x081တရာယ် ရှိတဲ့ ရေသန့်ဘူးတွေ အကြော်စုံတွေထဲကို ဘာလို့ ထည့်ကြော်ကြရတာလဲ ဆိုတော့ အဲလိုရေသန့်ဘူး ထည့်ကြော်ထားတဲ့ အကြော်ဟာ အထူးကြွပ်မွနေပြီး အဲလို ကြွပ်ရွစားကောင်းမှုကလဲ အရမ်းကို တာရှည်ခံတယ်လို့ အကြော်လုပ်ငန်းအကူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ရပ်တွေကို အကြော်ဖိုတွေနဲ့ နှစ်ပြန်ကြော် လုပ်ငန်းအခိျု့က လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ အတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့ သတင်းတွေအရ ကြားသိနေရတာ ကြာပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဒီလို ၀ိသမလောဘနဲ့ စီးပွားရှာတဲ့ လုပ်ရပ်ကို လိုက်လံစစ်ဆေးပြီး အပြစ်ပေး တားဆီးနိုင်ဖို့ လိုအပ်လှသလို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကို ဦးစားပေး စောင့်ရှောက်တဲ့ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အခိုင်အမာ ရှိလာပါစေလို့ ဆန0x081ဒပြုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော် တို့ မမီလောက် ပါဘူး အဲ့ အချိန်ကို။ရေသန့်ဘူး ကိစ0x081စအတွက် ၀မ်းသာရပေမယ့် ကျွန်တော် နောက်ထပ် ဘဝင်မကျဖြစ်နေလို့ တင်ပြချင်တဲ့ အချက်က အချိုမှုန့် ပါပဲ။ ကျွန်တော် သိသလောက် ကတော့ ယနေ့ကမ0x081ဘာပေါ်မှာ အချိုမှုန့်ကို နိုင်ငံတဲ့အဝှမ်း တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် စားသုံးနေတဲ့ နိုင်ငံဆိုလို့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတည်း ရှိမလားပဲ။ သေချာတာကတော့ အချိုမှုန့်ထုတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို တင်သွင်းနေတဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ အချိုမှုန့် လုံးဝမစားကြဘူးဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ဒီလို ဘေးအန0x081တရာယ် ရှိတယ်လို့ နိုင်ငံတော်က ကြေငြာထားပေမယ့် အချိုမှုန့်အရသာကို ပြည်သူတွေ စွဲနေလို့ ဆက်သုံးနေကြတာ မဖြစ်သင့်တော့ပါဘူး။ ဖြတ်သင့်ပါပြီ။အဆိုးဆုံးကတော့ သူ့အရသာနဲ့သူ ဆိမ့်မွှေးကြွပ်ရွနေတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ နှစ်ပြန်ကြော်များထဲမှာ အချိုမှုန့်တွေ အတုံးလိုက်အခဲလိုက် ထည့်နေတဲ့ ကိစ0x081စပါပဲ။ ပြည်သူတွေဘက်က တောင်းဆိုတာလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့၊ အဲဒီလောက်လဲ ထည့်စရာ မလိုဘဲနဲ့ကို ကိုယ့်အကြော်စုံ အရောင်းသွက်ရေး အတွက် ပြည်သူတွေ အချိုမှုန့်အန0x081တရာယ် များများတွေ့ပစေ ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ (တခိျု့ဆို အချိုမှုန့်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ လက်ဖက်ရည်၊ ပူတင်း၊ ရွှေကြည် စတဲ့ စားစရာတွေမှာပါ ထည့်နေကြတာ အသိဉာဏ် မဲ့ရာ ရောက်ပါတယ်)အချိုမှုန့် ဆိုတာ ဘာလဲ။ရေရှည် မှန်မှန် စားသွားရင် ဒီလောက် အန0x081တရာယ် များပါတယ် ဆိုတဲ့ အချိုမှုန့်ဆိုတာ Monosodium glutamate (MSG)လို့ခေါ်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Glutamic Acid လို့ခေါ်တဲ့ Amino Acid တစ်မျိုး ပါဝင်ပြီး စားစရာထဲ ထည့်လိုက်ရင် Free Glumate တွေ အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲသွားကာ အစားအသောက်တွေရဲ့ အရသာကို ဓာတုနည်းနဲ့ လျှာပေါ်မှာ ဆပွားတိုးပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။အချိုမှုန့်ဟာ ဟင်းခတ်ပစ0x081စည်းတစ်ခု ဟုတ်ပါသလားပုံမှန်သုံးသင့်တဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တစ်ခု လုံးဝမဟုတ်ပါ။ နည်းနည်းစားစား များများစားစား ရေရှည် စားရင် အန0x081တရာယ်ကတော့ ရှိတာပါပဲလို့ ပညာရှင်များက ပြောကြားပါတယ်။ Good Manufacturing Practice (GMP) လို့ခေါ်တဲ့ ကမ0x081ဘာ့အဆင့် ထုတ်လုပ်မှု စနစ်ကောင်း (GMP စနစ်) ရဲ့ အစားအသောက်တွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အချိုမှုန့် လုံးဝ မပါပါဘူး။အချိုမှုန့်ကို ရေရှည်ပုံမှန် စားသုံးသွားရင် ဘာဆိုးကျိုးတွေ ရှိလာနိုင်မလဲ?(၁) ဆီးချို မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်း (Insulin) ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာမှာ အနှောင့်အယှက်တစ်ရပ် ဖြစ်စေလို့ ဆီးချိုဖြစ်စေဖို့ ကောင်းကောင်း အထောက်အကူပြုပါတယ်။
(၂) အစာ အလွန်အကျွံ စားချင်စိတ်ကို တိုးပွားဖြစ်ပေါ်စေသလို အဝလွန်ခြင်းကို တားဆီးပေးတဲ့ ဟော်မုန်းများကိုပါ ပိတ်ဆို့လို့ အဝလွန်ခြင်းကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အဝလွန်ခြင်း ရောက်လာရင် သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ နှလုံးသွေးကြောပိတ် စတဲ့ အဖော်အပေါင်းတွေပါ ပါလာပါလိမ့်မယ်။
(၃) ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို မြန်မြန် ပျက်စီးယိုယွင်း စေပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်ကို အရွယ်မတိုင်ခင် ပျောက်ဆုံးစေပြီး မေ့တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်စေဖို့ အလားအလာ အရမ်း များစေပါတယ်။ အချိုမှုန့်ကို မွေးကင်းစကတည်းကနေ စပြီး စားတဲ့ ကလေးတွေမှာ ဉာဏ်ရည်ပိုင်း ယုတ်လျော့မှု ရှိတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
(၄) ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ အချိုမှုန့် သုံးစွဲမှုကို လုံးဝဖြတ်တောက်ရှောင်ကြဉ်ဖို့ အမျိုးသားအဆင့် ကြေငြာချက်တွေ ဥပဒေတွေ အလန့်တကြား ထုတ်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဂျာမန်ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တွေ ဘာတွေ့ရလို့လဲ ဆိုတာ စာဖတ်သူတို့ သိပါသလား။ အချိုမှုန့် စားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ မွေးလာတဲ့ ကလေးတွေဟာ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်း စွမ်းရည်ကျဆင်း၍ မတိုးတော့ခြင်း (Insulin-resistant) မွေးရာပါ ဖြစ်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကလေးတွေဟာ ကြီးလာရင် ဆီးချိုဖြစ်ဖို့ သေချာသလောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့ ဆီးချိုဖြစ်ပွားနှုန်း မြင့်မားနေတဲ့ အချက်တွေထဲက တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) နောက်တစ်ချက်က ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေ အချိုမှုန့်စားတဲ့ အကျင့်ကြောင့် မွေးလာတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ medulla oblongata, thalamus, or hypothalamus ဆိုတဲ့ ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ရှိတဲ့ အာရုံကြောဆဲလ်တွေကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ ဒီနေရာတွေဟာ အစားအသောက် စားချင်စိတ်ကို အဓိက ထိန်းချုပ်တဲ့ ဦးနှောက်ဧရိယာတွေ ဖြစ်လို့ ဒီလို ကလေးတွေဟာ ကြီးလာရင် အစားအသောက် အလွန်အကျွံစားတဲ့ အကျင့် ရှိကာ အဝလွန်ပြီး ရောဂါတွေ ထူစေတတ်တာ ကမ0x081ဘာတစ်ဝန်း လေ့လာတွေ့ရှိ ထားပါတယ်။(ဒါဟာ အချိုမှုန့်ကပေးတဲ့ အမျိုးသား ကျန်းမာရေး/လူမှုရေး ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး (National Health/Social Burden) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အချိုမှုန့် ၀ယ်ယူတင်သွင်းရတဲ့အတွက် နိုင်ငံနဲ့လူမျိုး အကျိုးရှိစေမယ့် တခြားအရာတွေ ၀ယ်ယူဖို့ နိုင်ငံခြားငွေ လျော့စေလို့ တိုင်းပြည်အတွက်လဲ နစ်နာပါတယ်)
(၆) မျိုးပွားစွမ်းရည် ကျဆင်းခြင်း၊ သားသမီးရနိုင်စွမ်း ကျဆင်းခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Chinese Restaurant Syndrome ခေါ် တရုတ်စားတော်ဆက်ရောဂါစု ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီရောဂါစုဟာ အချိုမှုန့် လွန်ကဲစွာ ပါတဲ့ အစားအသောက် စားပြီးပြီးချင်းမှာ မျက်နှာ၊ လည်ပင်း နဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ အနီစက်တွေ ထွက်လာခြင်း၊ ခေါင်းအရမ်းထိုးကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ မျက်နှာမှာ တင်းကြပ်နေတယ်လို့ ခံစားရတတ်ခြင်း၊ မေးလှုပ် ပါးစပ်ဖွင့်ရတာ လေးခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ခါးနာခြင်း စတာတွေ ခံစားရတတ်တဲ့ အချိုမှုန့်နဲ့ ဓာတ်မတည့်တဲ့ ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။
(၇) ပန်ကရိယခေါ် မုန့်ချိုအိတ်ရောင်ရောဂါ အပါအဝင် ကိုယ်တွင်းကလီစာ တစ်ခုခု ရောင်ယမ်းတဲ့ ရောဂါ ရှိနေသူတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ စာသင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ အထူးရှောင်ကြဉ် သင့်ပါတယ်။
(၈) လူအများစုက ဆားကအငန် အချိုမှုန့်က အပေါ့ ဆိုပြီး တလွဲမှတ်ယူထားကြပါတယ်။ ဒီတော့ ဆားထည့်လွန်လို့ ငန်သွားရင် အချိုမှုန့်များများ ထပ်ထည့် ပါတယ်။ အမှန်က ဆားက Sodium chloride ၊ အချိုမှုန့်က Monosodium glutamate ဖြစ်လို့ နှစ်ခုလုံး ဆိုဒီယမ် (Sodium) ဆားဓာတ်ဖြစ်ကာ နှစ်ခု ပြိုင်စားသုံးရင် သွေးတွင်းဆိုဒီယမ် မြင့်တက်မှု အရမ်းများလာစေကာ သွေးတိုးရောဂါကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးတိုးရောဂါ ကာကွယ်လိုသူများနဲ့ ရှိသူများဟာ အချိုမှုန့်ကို အထူးရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။အချိုမှုန့် စွဲလမ်းနေခြင်းကို ဘယ်လို လျှော့ချ အမြစ်ဖြတ်ကြမလဲ?(၁) လျှော့ချသုံးခြင်းဖြင့် စတင်ပါ။ အချိုမှုန့်ဟာ အသားတွေရဲ့ အရသာကိုသာ မြှင့်တင်ပေးတာ ဖြစ်လို့ အသီးအနှံတွေမှာ လုံးဝမသုံးပါနဲ့။(၂) ယေဘုယျလမ်းညွှန် (General Guideline) အရ ပြောရရင် အစားအသောက် တစ်ကီလို (၂.၂ပေါင်) ကို အချိုမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနဲ့ တစ်ဇွန်းထက် ပိုမသုံးပါနဲ့။ ဒါဆိုရင်တော့ အန0x081တရာယ် နည်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။(၃) ရယ်ဒီမိတ် အစားအသောက်တွေ အားလုံးနီးပါးမှာ အချိုမှုန့် ပါပြီးသားဆိုတာ သတိထားပါ။ ဘယ်တော့မှ အချိုမှုန့် ထပ်မထည့်ပါနဲ့။(၄) ရယ်ဒီမိတ် စားစရာတွေ ၀ယ်ရင် လေဘယ်လ် ပေါ်မှာ ပါတဲ့ အချိုမှုန့်ပါဝင်မှု ပမာဏကို ရှာဖွေပါ။ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ အစားအသောက်တံဆိပ်တွေ အားလုံးရဲ့ ပါဝင်ဖက်ပစ0x081စည်းစာရင်း (Ingredient List) ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ အချိုမှုန့် တကယ်သုံးထားရင် သုံးထားကြောင်း ပမာဏ အတိအကျ ပါပါတယ်။(၅) ရိုးရာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေ (ဥပမာ ပုစွန်ခြောက်၊ ငါးပိ စတာတွေ) ကို ပြန်လည်အစားထိုး သုံးသင့်ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှေးအစဉ်အဆက် ဘိုးဘွားများဟာ ထွားကျိုင်းသန်မာ ရောဂါကင်းခဲ့တာ အချိုမှုန့် မစားခဲ့ကြတာလည်း ပါပါတယ်။
ကဲ .. စာဖတ်သူရော.. စားအုံးမလား အချိုမှုန်...?
Translated to Unicode by drcrazy..ဟီး...August 28, 2011 ၊ အချိန် 4:52pm တွင် drcrazy မှ အသိပညာ ရနိုင်ဖွယ်ရာဆွေးနွေးချက်များ ခေါင်းစဉ်အောက် ၌ ရေးသားခဲ့သည်
ယေရှုသည် ဗုဒ္ဓရဟန်းတစ်ပါးသာ ဖြစ်၏
ခရစ်ယာန် ကျမ်းစာများတွင် ယေရှုသည် ဂျူးလူမျိုး ဖြစ်သည်ဟု အတိအကျ ရေးသားထားသည်။ ဂျူး လူမျိုးများ တွင် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် များသည် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘုရားသားတော်ဟု ခံယူခြင်း မရှိ။ ယခုမူ ယေရှုသည် သူ့ကိုယ်သူ ဘုရားသားတော်ဟု တိတိကျကျ ပြောဆိုထားပေ၏။ ဘုရားသားတော်
ဆိုသည့် အသုံး အနှုံးအား ဗုဒ္ဓရဟန်းသံဃာများထံမှ တုပ သုံးစွဲခြင်းသာ ဖြစ်ပေသည်။
ဤအတွက် တိကျခိုင်လုံသော အထောက် အထားမှာ-
ရုရှား စာရေး ဆရာကြီး နီခိုလာ့ဆ်နိုတိုဗစ် (Nicholas Nototvitch) ၏ `လူမသိသော ယေရှုဘ၀´ (The Unknown Life of Jesus) စာ အုပ်တွင် ရေးသားထားလေ၏။ စာရေးဆရာကြီးသည်
၁၈၇၇-၇၈ ရုရှ၊ တူရကီ စစ်ပွဲ အပြီး ရုရှ ခရီးသည် ဖြစ်၏။ သူသည် အပြန်ခရီးတွင်
အာဖဂန်နစ္စတန်မှ တဆင့် အိန္ဒိယနှင့် ကာက်ရ်ှမီးယားသို့ ရောက်ရှိခဲ့၏။ သူသည် ရုရှသို့
အပြန်ခရီးကို အာရှ အလယ်ပိုင်းမှ ဖြတ်ကျော် သွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာ
လာဒက်စ်မြို့ဘက်မှ ကျော်ရသည့် လမ်းအတိုင်း သွားလေသည်။ ထိုဒေသ၌ သူသည် ဟိမစ် (Himis)
ရှိ ဗုဒ္ဓ သာသနာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့ရာ လာမာရဟန်း ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး၏
ထံမှ ထိုကျောင်းတွင် ယေရှု၏ ဘဝကို ဖေါ်ပြထားသော အလွန်ရှေးကျသည့်
ထိုအကြောင်းကို သူသိလို စိတ်ပြင်းပြခဲ့သော်လည်း ဖတ်ရှုလေ့လာရမည့် ဒုက္ခကို မခံနိုင်ဘဲ ခရီးဆက်ခဲ့လေသည်။ သို့သော် ခရီး မထောက်မှီပင် သူသည် လဲကျလျှက် ခြေကျိုးသွားခဲ့သဖြင့်
ခရီးမဆက်နိုင်တော့ဘဲ- သူတည်းခဲ့ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ပြန်ပို့ ခံခဲ့ရလေ သည်။
ဒဏ်ရာအား ဆေးကု နေစဉ်ပင် သူသည် စကားပြန်တစ်ဦး၏ အကူအညီဖြင့် ယေရှု၏
ဘ၀မှတ်တမ်းများအား ရုရှ စာသို့ ပြန်နိုင် ခွင့် ရခဲ့လေသည်။စာရေးဆရာကြီးသည် ထိုစာမူအား ကိဗ်မြို့ရှိ သာသနာပိုင် မွန်ရှီယာ မလေတန်အား ပြသခဲ့သည်။ ထို့နောက် အမည်မဖေါ်လိုသော ရောမ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအား လည်းကောင်း၊ ပဲရစ်မြို့ ဂိုဏ်းချုပ်
ရိုတဲလီ အားလည်းကောင်း ပြသခဲ့သည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များက စာမူအား လူသိရှင်ကြား
ထုတ်ဝေရန် အကြံအား ကန့်ကွက်တားဆီးခဲ့လေသည်။ (အမှန်တရာအား ဤမျှခုံမင်သော သာသနာ့
ဦးသျှောင်များ ပေ တကား)။
ထိုစာအုပ်တွင်- ယေရှုသည် အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်တွင် ဆင်းဒ်ပြည်နယ်မှ ဤအရပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အရိယာ သူတော်စင်များ သတင်း သုံးရာနေရာများတွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။
သူသည် ဂျဂ္ဂနပ်မြို့၊ ရာဇဂရိဟမြို့၊ ဗာရာဏသီမြို့များတွင် ခြောက်နှစ်တာ
နေထိုင်ခဲ့သည်။-- လူ အများက ယေရှုအား ချစ်ခင်ကြလေ၏။ (စာမျက် နှာ ၁၀၇)။
သူသည် ရာသီပင်အလိုက် စိုက်ပင်များနှင့် ဆေးဝါးဘယဆေးပင်များ၏ အသုံးဝင်ပုံများကို လေ့လာခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့် ဗြဟ္မဏ ဘာသာတို့ကို လေ့လာခဲ့သည်။ သို့သော်
ဗြဟ္မဏဘာသာအား သူ မနှစ်သက်သည့်အပြင် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ရှုံချပြောဆိုခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ဗြဟ္မဏ၀ါဒီများ စစ်သည်များ ဗြဟ္မဏရဟန်းများ၏ အသက်ဘေးရန် ကြံစည်မှုကြောင့်
တိမ်းရှောင်သွားခဲ့ရသည်။ (စာမျက်နှာ ၁၁၂)။
ဤအကြောင်းအရာများတွင် သူသည် ဗုဒ္ဓရဟန်းတော်များတွင် တပည့်ခံသွားသည်၊ ထို့နောက်
ဗုဒ္ဓ၀ါဒကို မြတ်နိုးခုံမင်လျှက် ဗြဟ္မဏ ၀ါဒီများ၏ သုဒ္ဓရ ဓမ္မများကို
ပြောင်ပြောင်းတင်းတင်း ဆန့်ကျင်သွားသည်-ဟု အတိအလင်း ဖေါ်ပြထားပေသည်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာ ရှင်လုကာ ခရစ်ဝင်အရ သူသည် သူ၏ဇာတိ ဂျေရုဆလင်သို့ ရောက်သောအခါ- အသက် ၃၀ ကျော် ရှိပြီဖြစ်သည်။ ထိုဒေသတွင် သူသည် သူ့ကိုယ်သူ ဗုဒ္ဓရဟန်းတော် ဖြစ်ကြောင်း-
ဘုရားသားတော် ကြေငြာ ပေတော့သည်။ အကယ်၍ သူသည် ဖန်ဆင်း ရှင်ဝါဒအား
လက်ခံယုံကြည်လျှင်- ထိုဒေသသားတို့ လက်ခံယုံကြည်ထားသော ထာဝရဘုရား၏ တမန်တော်ဟုသာ
ကြေငြာမည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်၏။ ယေရှု၏ ပြောစကားတိုင်းတွင် သူ့ကိုယ်သူ ထာဝရဘုရား၏
တမန်တော် ဟု လုံးဝမတွေ့ရပေ။ ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒကို လက်ခံယုံကြည်ထားသော ဂျူးများက
ထာဝရဘုရားဟူသည် ရုပ်နာမ်ဒြဗ် တည်ရှိသော ဘုရားမဟုတ်။ ထိုဘုရားသည် သားမယားမရှိ၊
သားသမီးမရှိ-ဟု အခိုင်အမာ လက်ခံထားလေ၏။ ယေရှု၏ ပြေစကားသည် ထာဝရဘုရား ဟူသည်ကို
လက်ခံသော စကားမဟုတ် သူ့ကိုယ်သူ ဘုရား၏သားတော် ဟု အသက်ကိုတည် ပြောဆိုခြင်းသာ
ဖြစ်လေသည်။ ထိုစကားမှာ သူသည် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ရဟန်းတော် တစ်ပါး အဖြစ် အတိအကျခံယူထား၏
ဟူသည်ကို သက်သေခံသွားသော စကားသာ ဖြစ်လေသည်။
ယေရှုအား ကားစင်တင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်မှ ရှင်ပေါလုက ရဟန်းတော် ယေရှုပြောသည့် ဘုရားသားတော် ဆိုသည်မှ ဘုရား ဆိုသည် မှာ ဂျုးတို့လက်ခံထားသော ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှ
ထာဝရဘုရား ဖြစ်သည်ဟု တီထွင်လိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပေသည်။ သို့သော် ရှင်ပေါလု အနေဖြင့်
လက်အုပ်ချီ၍ ဘုရားရှိခိုး- အရိုအသေပြုခြင်းကို ဖျောက်ဖျက်ရန် မေ့လျှော့နေခဲ့ပေသည်။
ယေရှု၏ ဇာတိမျိုးနွယ် လူမျိုး၏ ဘာသာတရားများတွင် လက်အုပ်ချီလျှက် ရှိခိုးခြင်း အရိုအသေပြုခြင်း
ဓလေ့များ ယနေ့ထိတိုင် မတွေ့ရသေးဘဲ- ရဟန်းတော်ယေရှု၏ နောက်လိုက်များသည်သာ
ယေရှု၏သွန်သင်မှုဖြင့် ယခုလက်ရှိအထိ လက်အုပ်ချီ ရှိခိုးလျှက် ရှိနေသေးသည်မှာ
ကြီးမားသော သက်သေ တစ်ရပ်ပင် ဖြစ်လေသည်။
သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့်-ယနေ့အခါတွင် ယေရှုအား မြတ်နိုးကြည်ညို လှသော ခရစ်ယာန်များ အနေဖြင့် ရှင်ပေါလု၏ ထွင်လုံးများ နောက်သို့ လိုက်မနေတော့ဘဲ မိမိတို့၏
ဦးဆောင်နာယက ဖြစ်သော ယေရှု၏ သွန်သင်မှု အမှန်ဖြစ်သည့် မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာအား တိကျ စွာ
စေတနာမှန်ဖြင့်- ဒေသနာမှန်သို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ …….. ယဉ်ကျော့ (သမိုင်း) Posted by
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း..., ဆံပင်တွေကျွတ်မှာကို စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ အမျိုးသမီး တွေ အတွက် ဆံပင်ကျွတ်သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုဟာ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်း အချက်တစ်ခုပါ။ ဆံပင်ကျွတ် သက်သာဖို့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။အချိန်ပေးပြီး အနားယူအပန်းဖြေပါ။ဇင့်ဓာတ်၊ မန်းဂနိစ်နဲ့ ဗီတာမင် B12ချို့တဲ့ရင် ဆံပင်ကျွတ်တတ်ပါတယ်။မျှတသော အစားအစာများစားပါ။ဆံပင်ကျွတ်တာ သက်သာဖို့နဲ့ ဆံပင်ပေါက်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးဖို့အတွက် လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မျှတတဲ့ အစားအာဟာရ တွေ ကို စားသောက်ပေးတာပါ။အခွံမာသီး၊ ထောပတ်သီးနဲ့ ငါးလိုမျိုး အိုမီဂါသရီး ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တဲ့ အစာတွေဟာ ဆံပင်ရှင်သန်ကြီးထွားမှုကို အကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်။ Flax Seed အဆီနဲ့ ငါးအဆီ တွေကို ဖြည့်စွက် ဆေးအနေနဲ့ သောက်ပေးရင်လည်း ဆံပင်ကျွတ်တာကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။ဆံပင်ကျွတ်တာကို ကာကွယ်ဖို့ နဲ့ ထိန်းချုပ်ဖို့ အသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ဖို့ပါ။ယောဂ ကျင့်တာ၊ တရားထိုင်တာ၊ အသက်ရှူ လေ့ကျင့်ခန်းတွေက စိတ်ဖိစီးမှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး ဆံပင် ကျွတ်တာကို သက်သာစေပါတယ်။ခေါင်းလျှော်ရည်ကို ရွေးချယ်ပါ။သင့်ဆံပင်တွေပါးသွားလို့ စိတ်ညစ်နေရင် ဆံပင်သားကိုထူပြီး ပွစေတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ Conditioner ကို ရွေးချယ်သုံးပါ။ ခေါင်းမလျှော်ခင် ဆံပင်ကို မှန်မှန်ဆီလိမ်းပြီး ပြုစု ထိန်း သိမ်းပေးပါ။ဆီလိမ်းပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါသင့်ဦးရေပြားနဲ့ဆံပင်ကို သံလွင်ဆီ၊ အုန်းဆီ၊ လာဗင်ဒါဆီစတဲ့ ဆီလိမ်းပြီး မှန်မှန် နှိပ်နယ် ပေးရင် ဆံပင်မွေးညင်းအိတ်တွေဆီကို သွေးစီးဆင်းမှုတိုးလာပြီး ဆံပင်ရှင်သန်ကြီးထွား မှုကို အားပေးပါတယ်။ဆရာဝန်နဲ့ ပြပါ။ဆံပင်ကျွတ်တာဟာ သုံးလကျော်ကြာအောင် ဆက်ဖြစ်နေရင် ဒါမှမဟုတ် ဆံပင်တွေ အများကြီး အစုလိုက် အပြုံလိုက် ကျွတ်နေရင် ဆရာဝန်ပြဖို့ လိုပါတယ်။သိုင်းရွိုက် ပြဿနာလိုမျိုး တခြားရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ဆရာဝန်ပြပြီး စစ်ဆေးကုသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဇော ၇-ချက်နှင့် ပါတ်သက်၍ ဇောဆိုသည်မှာ... ဇ၀နကိုခေါ်ပါတယ်...
ဇော= ဇ၀န(ပါဠိ)= လျှင်မြန်ခြင်း= အရှိန်အဟုန်။
သည်နေရာမှ အရှိန်အဟုန်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ယူပါတယ်... ဇောမှာက ကုသိုလ်ဇော
အကုသိုလ်ဇော ကြိယာဇော ဆိုပြီး ရှိတဲ့နေရာမှာ ကြိယာဇောကတော့
ဘုရားရဟန္တာတွေမှာ ဖြစ်ပြီး... ဒကာဒကာမတို့ ဘုန်းကြီးတို့မှာတော့ ကုသိုလ်ဇော
အကုသိုလ်ဇောတွေ အမြဲမပြတ် ဖြစ်နေပါတယ်...
ဇော ဘယ်နှစ်ခါဖြစ်သလဲ အရင်လေ့လာရအောင်...
ကာမဇောတို့သည် ပကတိအခါ ၇-ကြိမ်သော် လည်းကောင်း၊ ၆-ကြိမ်သော် လည်းကောင်း ဖြစ်ကုန်၏...
သေခါနီးအခါ... မေ့မျောသွားသောအခါ မှီရာ ဟဒယဝတ္ထုရုပ် အားနည်းလှသောကြောင့်
၅-ကြိမ်သာ ဖြစ်ကုန်၏လို့ အဆိုရှိတဲ့အတွက် လယ်တီဆရာတော်ဘုရားက __အရိုးသတ်+ဆ၊
အားနည်းလှ၊ ပဉ္စအကြိမ်သာ__ ဆိုပြီး သံခိပ်လေးရေးပြီး
မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်... နောက် မြတ်ဗုဒ္ဓ ရေမီးအစုံစုံ တန်ခိုးပြာဋိဟာ
ပြတော်မူသောအခါတို့၌ ဝသီဘော် အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သော
ဈာန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကြောင့် ပစ္စဝေက္ခဏာ ကာမဇော... အဓိဋ္ဌာန် ကာမဇောတို့သည်
၄-ကြိမ်၊ ၅-ကြိမ် ဖြစ်ကုန်၏... ((ဤ၌ မြတ်စွာဘုရားမှာ ၄-ကြိမ်၊
အရှင်မောဂ္ဂလာန်စသည်တို့မှာ ၅-ကြိမ် ဖြစ်ကုန်၏ဟု အထူးမှတ်ရာ၏)) လို့
ဆက်လက်ပြီး ဆရာတော်မှ __ဝသီခေါင်ဖျား၊ ဈာန်နှင့်ငြား၊ လေး+ငါး နှစ်ထွေလာ__
ဆိုပြီး လင်္ကာစီထားပြန်ပါတယ်... ဇောဆို အားလုံး ၇-ကြိမ်ချည့်
ဇော ၇-ကြိမ်ဖြစ်ပုံနဲ့ ၀ီထိအစဉ်ကို ကြည့်ကြမယ်... (အတိမဟန္တာရုံဝီထိ) ရူပါရုံအဆင်းနဲ့ စက္ခုပသာဒတို့
တွေ့ဆုံပြီးနောက် မြင်သိစိတ်တစ်ခုတွင် စိတ်ဖြစ်ပုံ အစဉ်အတန်းမှာ...
တီ+န+ဒ+ပ+စ+သံ+ဏ+၀ု+ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ+ရုံ+ရုံ+ဘွင်+ဘွင်
တီ= အတီတဘ၀င်= (အတီတ=လွန်ပြီး + ဘ၀င်= ဘ၀င်စိတ်) အာရုံသစ်မထင်မှီ ချုပ်ပျက်သွားသော ဘ၀င်စိတ်...
န= ဘ၀င်္ဂစလန= (စလန= လှုပ်သော + ဘ၀င်္ဂ= ဘ၀င်) အာရုံဟောင်းကို မလွတ်သေး အသစ်ကိုလည်း စွဲမြဲစွာ မယူနိုင်သေး လှုပ်နေသောသဘော...
ဒ= ဘ၀င်္ဂုပစ္ဆေဒ= (ဘ၀င်္ဂ= ဘ၀င် + ဥပစ္ဆေဒ= ပြတ်စဲသော) အာရုံသစ်ကိုယူရန် အာရုံဟောင်းကိုဖြတ်သော နောက်ဆုံး ဘ၀င်စိတ်...
ပ= ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇာန်း= ထင်လာသောအာရုံကို ဘာပါလိမ့်လို့ တစ်ကြိမ် ဆင်ခြင်ပြီးချုပ်၏။
စ= စက္ခုပသာဒကိုမှီ၍ စက္ခုဝိညာဏ် အဆင်းကို မြင်သိစိတ်ဖြစ်...
သံ= သမ္ပဋိစ္ဆိုင်းစိတ်= ရူပါရုံအဆင်းကို ခံယူသောစိတ်... လက္ခံသောစိတ်...
ဏ= သန္တီရဏ= အာရုံကို စူးစမ်း ထောက်လှမ်းသောစိတ်...
၀ု= ၀ုဋ္ဌော= အာရုံကို ကောင်းမကောင်း ဆုံးဖြတ်သောစိတ်... (၀ုဋ္ဌောထိ အာရုံများ မထင်ရှားသေး ခံစားမှု ထိထိမိမိ မသိသေးသေး)
ဇော= ဇ၀န= အရသာပေါ်အောင် အရှိန်ကောင်းကောင်းနှင့် ကာမဇော ၂၉-ပါးမှ တစ်ပါးပါးသော
ဇောစိတ်သည် ၇-ကြိမ်တိုင်တိုင်စောသည်။ နှလုံးသွင်းကောင်းလျှင် ကုသိုလ်ဇော...
နှလုံးသွင်းမကောင်းလျှင် အကုသိုလ်ဇော... ရဟန္တာဖြစ်လျှင် ကြိယာဇော...
ရုံ= တဒါရုံ= ဇောနောက်လိုက်၍ အာရုံ၏အရသာကို ထပ်မံ ခံစားခြင်း...
ဘွင်= ဘ၀င်= ဥပပတ္တိဘ၀၏အကြောင်း... (အတ်ိတ်ကံကြောင့် လူသေမသွားအောင် စိတ်ကလေး ဆက်ဖြစ်ပေးနေခြင်း ဖြစ်သည်)
မရှင်းသေးလျှင် သည်ဥပမာနဲ့ လေ့လာကြည့်ကြမယ်...
သရက်ပင်အောက်က လူတစ်ယောက် ခေါင်းမြီးခြုံ အိပ်နေသည်= ဘ၀င်ကျ...
သရက်သီးကြွေကျ= အာရုံနှင့် ဒွါရ တိုက်ဆိုင်သည်နှင့် တူပါသည်...
လူနိုးလာသည်= ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇာန်း ဖြစ်ပုံနှင့် တူပါသည်...
ခေါင်းမြီးခြုံဖွင့်ကြည့်= စက္ခုဝိညာဏ်စိတ် ဖြစ်ပုံနှင့် တူပါသည်...
သရက်သီးလှမ်းယူ= သမ္ပဋိစ္ဆိုင်း ဖြစ်ပုံနှင့် တူပါသည်...
မှည့် မမှည့် နှိပ်ကြည့်= သန္တီရစဏ ဖြစ်ပုံနှင့် တူပါသည်...
မှည့်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်= ၀ုဋ္ဌော ဖြစ်ပုံနှင့် တူပါသည်...
ကိုက်စား အရသာခံစား= ဇော ဖြစ်ပုံနှင့် တူပါသည်...
ခံတွင်းရှင်း၍ မျိုချ= တဒါရုံ ဖြစ်ပုံနှင့် တူပါသည်...
ခေါင်းမြီးခြုံ ပြန်အိပ်= ဘ၀င်ပြန် ဖြစ်ပုံနှင့် တူပါသည်...
အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနှင့် ကုသိုလ်စိတ် အကုသိုလ်စိတ်များ ဖြစ်လာပြီဖြစ်၍ ဇော... ဇော ၇-ကြိမ်၏ အကျိုးတရားတို့မှာ...
(၁) ပထမဇောသည်... ပဋိသန္ဓေကျိုးကိုမပေး ယခုလက်ရှိ ပ၀တ္တိကျိုးကိုပေးနိုင်၏
ချက်ချင်းလက်ငင်း ထီပေါက်နိုင်သည် ကိုယ်လိုချင်တာရနိုင်မည်
ရွှေအိုးကြီးများရနိုင်သလို... ခြေကျိုး လက်ကျိုး သေချင်းဆိုးနှင့်
သေစေနိုင်သော စွမ်းအားများပါရှိသည်... သူက အကျိုးမပေးက ဘယ်သောအခါမှ
အကျိုးမပေးတော့ အဟောသိကံ... ပထမဇောကံအကျိုး ပျက်၏...
(၇) သတ္တမဇော(သို့)နောက်ဆုံးဇော... သူသည်ကား ဒုတိယ-လာမည့်ဘ၀ ပဋိသန္ဓေကျိုးကို
အကျိုးပေးနိုင်သည့်...ပြင်... ပ၀တ္တိကျိုးကိုလည်း ပေးနိုင်သည်...
ကုသိုလ်ဇောသည် လူ-နတ် ဖြစ်စေနိုင်သလို... အကုသိုလ်ဇောသည်ကား အပါယ
(၂-မှ-၆) ဒုတိယဇောမှဆဋ္ဌမဇောထိ... အကျိုးပေးပုံကား... တတိယဘ၀မှ စတင်၍
ပဋိသန္ဓေအကျိုးနှင့် ပ၀တ္တိအကျိုးတို့ကို ဘ၀သံသရာ မပြတ်မခြင်း
သို့အတွက် သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ ကုသိုလ်အကျိုးပေးနှင့် အကုသိုလ် အကျိုးပေးတို့သည်ကား ပြဒါးတစ်လမ်း
သံတစ်လမ်းဖြစ်ပေသည်... ကုသိုလ်၏ အကျိုးပေးကား ချိုမြိန်လှသော မချစ်စု
သရက်သီး စားရသလို... အကုသိုလ်၏ အကျိုးပေးသည်ကား... ခါးသီးလှပေသည်တကား...
ကျွန်ုပ်အတွက်တော့ အမေပေးသောအသည်း အစိမ်းသက်သက် အလှီးခံလိုက်ရပေပြီ...
အကုသိုလ် ပ၀တ္တိအကျိုးသည်ကား ခါးသီးလှပေ၏... အသိ သတိရှိကြပါကုန်...
သင်တို့မှာလည်း နောက်တွဲတွေ အများကြီး ရှိပေဦးမည်... ရှေ့ဆက်၍ ကောင်းမှု
ကုသိုလ်တွေ ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ... သူတော်ကောင်းတရားတွေ
လွမ်းခြုံနိုင်ကြပါစေ... သာသနာကို စောင့်ရှောက်နိုင်သော အမျိုးကောင်း
အပ္ပမာဒတရား လက်ကိုင်ထားလို့ သူတော်ကောင်းတရားတွေ ကျင့်နိုင်ကြစေ မြတ်ဗုဒ္ဓအမွေ...
ကိုယ့်အပြစ်ကို ကိုယ် ဖုံးကွယ်မထားတတ်ကြခြင်း
လူဆိုသည်မှာ အပြစ်နဲ့ မကင်းသော သတ္တ၀ါဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် တစ်ဘက်၌အပြစ်ကို ဖုံးကွယ်တတ်သော အကျင့်လည်း ရှိကြလေသည်။ မည်သူမျှ အပြစ်ရှိသောသူအဖြစ်သို့ မရောက်လိုကြပေ။ တကယ်အပြစ် ကျုးလွန်ခဲ့သော တရားခံများကပင် ဥပဒေရှေ့မှောက်၌ပင် အပြစ်လွတ်အောင် လျှောက်လဲကြ၏။ ယုတ်စွအဆုံး အပြစ်ပေါ့လိုကြ၏။ ဤသည်မှာ လူ့အကျင့်ပင် ဖြစ်ပေသည်။အပြစ်မဖြစ်လိုလျှင် အပြင်တင်မခံလိုလျှင် အပြစ်မဖြစ်အောင် နေလျှင် ရပါသလော၊ လူသည် သိလျက်ဖြစ်စေ မသိဘဲဖြစ်စေ၊ ဆင်ခြေကန်၍ ဖြစ်စေ၊ တစ်ချိန်ချိန် တစ်ခါခါတွင် အပြစ်ပြုလုပ်မိ တတ်ပေသည်။ သုိ့ရာတွင် မိမိက အပြစ်ကို တမင်ပြုလုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အမှတ်မထင် အပြစ်ဖြစ်လာရသည်ဟု လည်းကောင်း၊ မိမိကိုယ်တိုင်က အပြစ်ဟုမယူဆဘဲ အခြားလူများက အပြစ်ဟု ယူဆခြင်းကြောင့်သာ အပြစ်ဖြစ်လာသည်ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ မိမိအပြုမူသည် အပြစ်ဟု ခေါ်ဝေါ်ပိုင်းခြားလောက်သော သတ်မှတ်ချက်သို့ မရှိဟူ၍လည်းကောင်း မှတ်ထင်ယူဆနေမိတတ်ကြပေသည်။ အချုပ်အားဖြင့် မိမိကိုယ်ကို အပြစ်ငြိအောင် ထုချေ ဖုံးကွယ်နေတတ်ပေသည်။ဤထုချေချက်သည် လုပ်ကြံ ထုချေချက်မျိုးလည်း ရှိ၍ တကယ်ရိုးသားစွာပင် ဤအတိုင်း ရှုမြင်နေခြင်းမျိုးလည်း ရှိပေသည်။ များစွာသောအပြစ်တို့သည် ကာယကံရှင်၏ ပေါ့ပေါ့ဆဆ တွေးမှု၊ အရေးမထားမှု၊ ကောက်ချက်လွဲမှုတွေကြောင့် ကျူးလွန်မိခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပေသည်။ခိုးယူကျူးလွန်သူက စားစရာမရှိ၍ ခိုးရပါသည်ဟု ဆင်ခြေပေးတတ်ပေသည်။ အဘယ်ကြောင့် ရရာအလုပ်ကို ရိုးသားစွာ မလုပ်သည်ကိုမူ သတိမထားတတ်ပေ။ သူတစ်ပါး မယားကို ကြာခိုသူက မေတ္တာ၏ လျို့ဝှက် နက်နဲဆန်းကြယ်ပုံကို ဖွဲ့နွဲ့ သီကြူးနေတတ်ပေသည်။ လူ့စည်း လူ့ဘောင် နှင့် ဘ၀ပြဿနာများကိုမူ ထည့်သွင်းမစဉ်းစားတတ်ပေ။မိလိန္ဒပဥှာတွင် အပြစ်ကို မသိ၍ ကျူးလွန်သူက သိ၍ ကျူးလွန်သည်ထက် ပို၍ ဆိုးဝါးကြောင်းဆိုသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် အပြစ်ဟုသိသူသည် တစ်ကြိမ်သာ ကျူးလွန်၍ နောင်တရသွားနိုင်ပြီး အပြစ်ကို ၀န်ခံရန် လည်း အခွင့်လမ်းရှိပြီး... အပြစ်ဟူ၍ မသိ မယူဆ သူက ထပ်ကာတလဲလဲ ကျူးလွန်နေနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။ ဤနည်းတိုင်းပင် အပြစ်ကြီးတစ်ခုကို အပြစ်ဟု မမြင်ဘဲ မိမိကိုယ်ကို လှည့်စားနေလျှင် ဆက်ကာ ဆက်ကာ အပြစ်ကျူးလွန်နေပေလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့် အပြစ်ဟုတ်မဟုတ် သဘာဝကျကျ ဆင်ခြင်ရပေမည်။ မိမိကိုယ်ကို ညှာတာဖုံး ကွယ်ကာ တစ်ကွက်ချန်၍ မတွေးသင့်၊ မိမိအပြစ်ကို လျှော့ပေါ့၍ မစဉ်းစားသင့်ပေ။ိမိအပြစ်ကို သူတစ်ပါးအပေါ်၌ ပုံချခြင်း၊ လှီးလွှဲအကြောင်းပြခြင်း မလုပ်သင့်ပေ။ မိမိအပြစ်ကို ၀န်ခံရန်နှင့် အပြစ်ဟု သတိပြုမိသော ခဏ၌ ရပ်တန်းမှ ရပ်ရန် ၀န်မလေးပါနှင့်။အပြစ်ကို ဖုံးကွယ်နေခြင်းထက် အပြစ်ကို ရှောင်ခြင်း၊ သတိနှင့် စစ်ဆေး၍ အပြစ်ကို တစ်ခါမှ နှစ်ခါ ဆက်လက် မကျူးလွန်မိအောင် ထိန်းသိမ်းခြင်း စသည်က ပို၍ အကျိုးထိရောက် ပေသည်။ အပြစ်ကို ဖုံးတတ်သော ညဉ်ကြောင့် မိမိပြုလုပ်သမျှကို အမှန်ဟူ၍ ဘက်လိုက်ယူဆကာ အတွေးအခေါ် မှောက်မှားလာတတ်ပေသည်။ မိမိကိုယ်ကို မိမိလိမ်ညာ နေမိ တတ်ပေသည်။ အပြစ်ကို ရဲရဲရင့်ရင့် ၀န်ခံ၍ တစ်ကြိမ်ထက် ပို၍ မမှားအောင် သတိပြုခြင်းသည် လူကောင်းသူကောင်းတို့၏ အလေ့အထပင် ဖြစ်သည်။ ထန်းရည်မူးခိုက် နောင်တရပြီး ထန်းရေမူးပြေသော် ထန်းပင်ကို မော့ကြည့်ပြန်ခြင်းမျိုး မဖြစ်ကြစေရန်...
အမှားသိ၍ ပြင်ဆင်ကာ အမှန်မြင် တတ်သော.. လူသားဘ၀အဖြစ်ဖြင့် မိမိအပြစ်ကို မိမိ မဖုံးကွယ်ကြစေရန် ကိုတာ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်..
မသိမှုအမှောင် ဖုံးလိုက်ပုံများ..ရေမြှုပ်လုံး..ရွှေတုံးထင်လို့ ထထသုတ်ရတာလဲ အခါခါ..ရေပွက်ပမာ ဖြစ်-တည်-ပျက်အစဉ်ကဆက်တော့ အမျှင်က မပျက်ချင်အလမ္ပာယ် တန်ခိုးနဲ့ တံလျှပ်ကို ရေထင်ခဲ့..အနှစ်မဲ့ ငါ..ငါ..ငါ..အော်သံသရာမှာ အပျော်ကြီးပျော်ခဲ့ ပြီးပြီ…
အကြောင်းကံပျော်ပျော်ပြုခဲ့မှဖြင့်အကျိုးခံဖော်ဖော်ထုခါမှ..သိကြားကုရမလို နတ်ကုရမလို..ခရာတာတာ ညုမနေပါနဲ့..တကယ်တော့..ဘယ်သူမပြု မိမိမှုမဟုတ်လား…
မသိမှုက စတဲ့ သံသရာ..သိ တစ်လုံးမှာ ဆုံးမယ်တဲ့မဟာဝီရ လမ်းညွှန်ပြခဲ့ပြီ..လည်ပတ်စေခဲ့ ဓမ္မစက်နဲ့တပည့်သား သံဃာ တို့ဆရာတွေအဆင့်ဆင့်လက်ကမ်း..ဒါ .. လျှောက်သင့်တဲ့ လမ်းလေ….
ခံစား နှိပ်စက် အစွန်းနှစ်ဘက်လွတ်ရာမဇ္ဈိမ ပဋိပဒါ …ကွယ်…မင်းလိုချင်ရင်လေ..အတိတ်ကိုမလွမ်း..အနာဂတ် မတမ်းပဲ..တည့်တည့်ကြည့် အခုမြင်ဟေ့..ဒါ တရား ကွဲ့..လာလှည့် ရှုလှည့်..ခုလိုချင် အခုကျင့်..အယူမတိမ်းပဲ ချက်ချင်းငြိမ်းစေမယ်….
လည်နေတဲ့ ချားရဟတ်တဏှာ ဆီကုန်ရင် ရပ်မဟဲ့ လို့..ဒုက္ခကိုမြင် သမုဒယကို မခင်ပါမှလောက မစင်တွင်းကနေမဂ္ဂင်ဖောင်စီး နိဗ္ဗူတာ နီးလိမ့်မယ်….
မောဟကိုရပ်ရင်..လောဘကိုဖြတ်..ဒေါသကို တန့်စေခဲ့မြင်ရင်သိ..ကြားရင်သိ..နံရင်သိ…ထိမိရင် သတိချပ်.. ဒွါရမှာ အာရုံလာလာကပ်ရင်..တထပ်တည်းသာသိပေး..မကြာမတင်အနီးလေးပါ..တည်ငြိမ်တဲ့နှလုံး..အေးချမ်းတဲ့အပြုံးနဲ့..သံသရာ အဆုံးဆိုတာ…..ရေးသူ --- ကိုဇော်နိုင်
Mae` Kwet Ko Shar ``MarMarAye
ဓမ္မဒူတ ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ၏ အသိပေးစကားစု
(၁)။တစ်ဖက်သတ်ဆိုတာ တစ်ဖက်ကိုသတ်တာပါ။ဒါပေမယ့် နှစ်ဖက်လုံးသေသွားပြီးဆိုကျိုးတွေဖြစ်လာမယ်။
(၂)။ပေးနိုင်သူထံကတောင်း။လက်ခံမယ့်သူကိုပေး။ဒါမှအဆင်ပြေမယ်။(၃)။သစ်ပင်တိုင်းမှာအလှတစ်မျိုးစီရှိကြပါတယ်။လူတိုင်းရဲ့တစ်မျိုးစီအလှကိုမြင်တတ်ရင်ဘယ်လောက်သာယာလိုက်မလဲလို့။(၄)။ခွင့်လွှတ်နိုင်ဖို့ အကြောင်းပြချက်တွေ ရှာနေတတ်တယ်။သည်းခံနိုင်ဖို့ မြိုသိပ်မှုကို မွေးယူရတယ်။နားလည်နိုင်ပြီဆိုရင် ဆင်ခြေမပါတဲ့ ခွင့်လွှတ်မှု ၊ပွင့်လင်းတဲ့ သီးခံမှုတွေ ဖြစ်နေပါပြီ။(၅)။မကောင်းတာကိုကြောက်ပြီး၊မကောင်းလုပ်တဲ့သူကို သနားလိုက်စမ်းပါ။မကောင်းတဲ့သူကို စိတ်ဆိုးလိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ပါ သနားစရာ သတ္တဝါစာရင်းဝင်သွားပြီ။(၆)။ခွေးနှစ်ကောင်ကိုက်နေရင် ဝင်ပြီးဖျင်မလား? ဝေးဝေးရှောင်မလား? ဝင်ပြီးကိုက်မိရင်တော့….(၇)။အမှိုက်လှဲပြီးမှ ရှင်းတာထက်၊မရှုပ်ပဲရှင်းနေတာက ပိုကောင်းမယ်။(၈)။ကိုယ်ပိုင်အလုပ်မရှိသူဟာ သူများအလုပ်ကို ဝင်ရှုပ်တတ်တယ်။ကိုယ်ပိုင်အသိဥာဏ်မရှိတဲ့ လူဟာ…..(၉)။မပြောပဲ နားလည်နိုင်တာကို သွားပြောလိုက်မှ အဓိပ္ပါယ်တွေ တစ်မျိုးဖြစ်ကုန်ရော။(၁၀)။ကြေကွဲမှု၊ပျက်စီးမှု၊ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အတူ၊ထွက်ပေါ်လာတဲ့ “တောင်းပန်ပါတယ်”ဆိုတဲ့ စကားကို လွယ်လွယ်မသုံးမိအောင် သတိထားပါ။(၁၁)။စဉ်းစားနေရင် မသိသေးလို့၊သိပြီးရင်လည်း စဉ်းစားစရာမလိုတော့ပါဘူး။(၁၂)။လူကြီး ခလေး။ ခလေး လူကြီး။ခလေး ခလေး။ လူကြီး လူကြီး။လေးမျိုးရှိတယ်။နေရာထက် အရည်အချင်းက အမြဲသာနေရမယ်။(၁၃)။အခြေအနေက ပေးတဲ့အသိကို ၊ အသုံးချနိုင်တဲ့ အသိဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြောင်းလဲနိုင်ပါစေ။(၁၄)။အရွယ်ချင်း မတူရင်၊ နေရာချင်း မတူရင်၊အဖြစ်ချင်း မတူရင်၊အသိချင်း မတူနိုင်ပါဘူး။ဒါလေးတော့ နားလည်သင့်တာပေါ့။(၁၅)။စိတ်တူ ကိုယ်တူ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ထုံးစံမရှိပေမယ့်၊ဖြစ်အောင်တော့ နေကြရမှာပဲ။အဲဒါမှအရည်အချင်း။(၁၆)။မသင့်တော်တဲ့ နေရာကို ရောက်ခဲ့ရင်တောင်မှ ၊ သင့်တော်တဲ့ အကျင့်တွေ မဖျောက်ပစ်ပါနဲ့။(၁၇)။မင်းလိုပဲ သူပြောသာတာ အဟုတ်၊ သူလုပ်သာတာ အမှန် ၊သူကြံသာတာ အကောင်း၊ ထင်နေကြတယ်။(၁၈)။ပညာဆိုတာကောင်းပါတယ်။ပညာရှိချင်တာလား?ပညာပြချင်တာလား ?နည်းနည်းတော့ သတိထားပါဦး။(၁၉)။ငယ်တုန်းက ထမင်းကို ဝါးပြီးခွံ့ခဲ့တာ ကောင်းပေမယ့်၊ ကြီးလာတဲ့အခါ အံဖတ်တွေ ထင်နေတတ်တယ်။(၂၀)။မြင့်မြတ်တဲ့ သူတွေဟာ ပျာယာမခတ်ကြတော့ပါဘူး။တစ်ချို့က ပျာယာခတ်နေရတာကို ကျေနပ်နေကြတယ်။(၂၁)။အလိုက်မသိတတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ကြောင့် ကိုယ်ပါ အလိုက်မသိတဲ့ သူ အဖြစ်မခံပါနဲ့။(၂၂)။ကဲ့ရဲ့စရာ တွေ့ရင် ပါးစပ်ကို တစ်တွတ်တွတ်နဲ့ အမြဲဖွင့်တတ်ပေမယ့် ၊ ချီးမွမ်းစရာကြုံရင် သောခတ်ပြီး အသေပိတ်ထားတတ်တယ်။(၂၃)။မူရင်းကောင်းမှ မိတ္တူကောင်းမယ်။ သူများတွေဖတ်ချင်သလို ဖတ်ကြပါစေ။ကိုယ်ပိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိက ကောင်းဖို့လိုတယ်။သူတို့အကြိုက်လိုက်ပြီး မရေးနဲ့။(၂၄)။ သနားစရာကို သနားတာ ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါ။ဟန်ဆောင်တာကို မသိရင် လူညံ့ဖြစ်သွားပြီ။(၂၅)။အားလုံးကို သိပါတယ်လို့ ပြောပေမယ့် မဟုတ်တာတွေကို အဟုတ်လို့ သိနေခဲ့ရင် အလကားပါပဲ။(၂၆)။စုပြီး၊ ဆုံပြီး ရှင်းလင်းကြတာက စုဆုံပြီး ငြင်းတာထက် အကျိုးကောင်းတွေ များပါတယ်။(၂၇)။အလုပ်မှာ မပျော်ရင် မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ပျော်လွန်းရင်လည်း အလုပ်မဖြစ်တာတွေ ကြုံလိမ့်မယ်။(၂၈)။လေကြောင့်ပျံသန်းနိုင်တဲ့ ငှက်ဟာ လေရှိမှန်းမသိကြသလို၊ ရေကြောင့်ကူးခပ်နိုင်တဲ့ ငါးဟာ ရေရှိမှန်း မသိကြသလို၊ဓမ္မ အဓမ္မ ကြောင့် ကောင်းကောင်း ဆိုးဆိုး ဖြစ်နေတဲ့ သတ္တဝါတွေဟာလည်း ဓမ္မ အဓမ္မကို ရှိမှန်း မသိကြပါဘူး။(၂၉)။သူများလဲနေလို့ ထူပေးတာဟာ ကောင်းတဲ့စိတ်ပါ။ကိုယ်ချော်လဲနေတာကိုလည်း ရပ်နိုင်အောင် အရင်အားမွေးပါဦး။(၃၀)။ကြိုးစားနေကြတာ ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူဌေးဖြစ်ဖို့ပဲ မနေမနား ကြိုးစားကြတယ်။ချမ်းသာအောင် မလုပ်ကြဘူး။(၃၁)။နင် - မမှတ်သေးဘူးလား?(၃၂)။ပုံနှိပ်စာအုပ်၊ လောက စာအုပ် ၊ စိတ်စာအုပ် သုံးမျိုးရှိတယ်။ စိတ်ကိုဖတ်တတ်ဖို့ တစ်ခြားစာအုပ်တွေကို ဖတ်နေရတယ်။(၃၃)။ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ အချစ်ဆုံးပါပဲ၊ ဒီစကားကို မယုံရင် တစ်လောကလုံးရဲ့ အလိမ် အညာတွေကို ခံနေရပြီမှတ်။(၃၄)။အသိပေး ဆုံးမပေးမည့်သူကို ရှာသင်ပေမယ့် ကိုယ်စကားနားထောင်မည့် သူကိုပဲ ရှာနေကြတယ်။(၃၅)။အပြစ်ကို ကဲ့ရဲ့တာနဲ့ လူကိုကဲ့ရဲ့တာ ခွဲခွဲခြားခြား သိတတ်ကြရင် ကဲ့ရဲ့မှုက လွတ်မယ်။(၃၆)။”ရောင်ရဲနိုင်တယ်”ဆိုတာ အခွင့်အရေးကို ရသလောက်နဲ့ ကျေနပ်နိုင်တာ။ အလုပ်ကို ရောင်ရဲ နေရင်တော့ “အပျင်းကြီးတယ်”ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ပဲရသွားမယ်။(၃၇)။စကားပြောနေရင်း လူအုပ်ကြားထဲ ဆူးခတ်ကြီးကို ဆွဲမသွားပါနဲ့။ဆွဲလာတာတွေ့ရင်လည်း လွတ်အောင်ရှောင်လိုက်ပါ။(၃၈)။လျှာကို သွားက ကိုက်မိတတ်တယ်။ဒါပေမယ့် ကိုယ့်လျှာကိုတော့ သူများရဲ့သွားက လာပြီးမကိုက်ပါဘူး။(၃၉)။တစ်ဆယ်က ကိုးဖြစ်သွားတယ်။ ရှစ်က ကိုးဖြစ်လာတယ်။ ကိုးချင်းတူပေမယ့် မတူတာကို သိလိုက်စမ်းပါ။(၄၀)။မှားနေတာကို မှားတယ်လို့ ထောက်ပြပေမယ့် ဆက်လုပ်နေရင် မှားတာကို မှန်တယ်လို့ ခေါင်းငြိမ့်တိုင်း ဆက်လုပ်နေရင် ပိုဆိုးသွားမယ်။(၄၁)။ဒါကိုပဲ ကြည့် ၊ ဒါကိုပဲ စဉ်းစား ၊ ဒါကိုပဲနှစ်သက် ၊ ဒါနဲ့ပဲ မွေ့လျော် ပျော်မွေ့နေရင် ဒါပဲ ဖြစ်နေမှာပေါ့။(၄၂)။ကိုယ်က မှန်အောင်နေပြီး သူများ မှားနေရင်လည်း နားလည်နိုင်ရမယ်။(၄၃)။အားနည်းချက်ကိုကြည့်ပြီး စိတ်ပျက်တတ်သလို အာသာချက်ကြောင့်လည်း အထင်ကြီးတတ်တယ်။တစ်ဖက်စွန်းရောက်ရင် ဘယ်ဟာမှ မကောင်းဘူး။ဓမ္မဒူတဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ ၏ အသိပေးတရားစုများ စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
စာဖတ်ခြင်းကို တန်ဖိုးထားလေးစားသော ဆရာချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ) ၏ အတွေးအမြင်
စာဖတ်ခြင်းကို တန်ဖိုးထားလေးစားသော ဆရာချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ) ပြည်သူ အကျိုးပြုနှင့် လူမှူရေးတက်ကျမ်းစာပေများဖြင့် ယနေ့ လူကြီးလူငယ်များအတွက်ဦးနှောက်အဟာရ ဖြစ်စေသော စာပေများရေးသားလေ့ ရှိသည့် စာရေးဆရာကြီး ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)မှ စာဖတ်ခြင်း၏ကောင်ကျိုးနှင့် အတွေးအမြင်များကို စေတနာနိဒါန်း ၊ မေတ္တာနိဂုံး တို့ ဖြင့် တင်ပြခဲ့ပါသည်။
အနာဂတ်မှာရင်ဆိုင်မယ့်လူအဖွဲအစည်း အသစ်က နှစ်ဆယ်ရာ စုနှောင်းပိုင်းက လူဘောင်မျိုးမဟုတ်ပဲ အလွန်လျှင်မြန်လှတဲ့ အပြေင်းအလဲလူအဖွဲအစည်း တစ်ခုအဖြစ် တွေးခေါ်ဆောင်ရွက်မှူ အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများထွက်ေါ်နေပါပြီ ။ခေတ် ၊စနစ် ၊ စစ်ပွဲ ၊ နည်းပညာ ၊ တီထွင်ထုတ်လုပ်မှူ အားလုံးမှာသာလွန်အနိုင်ရရှိနေသော အခြေအနေများကို သုံးသပ်မည်ဆိုပါက စီမံခံခွဲမှူသာလွန်ကောင်းမွန်သော နိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူ နည်းစနစ်များကသာ ဦးဆောင်သွားသည်ကို တွေမြင်နေကြရပြီးဖြစ်သည် ။ စ်ီမံခံခွဲမှူအမျိုးမျိုးအနက်မှာ တစ်ဦးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ အလုပ် ၊ အချိန် ၊ ဘ၀တွေဟာလဲ ကောင်းမွန်တဲ့ စီမံခံခွဲမှူများ၏ သက်ရောက်မှူရှိသလို.... နိုင်ငံတစ်ခုနှင့် နှိူင်းရှင်သုံးသပ်မည်ဆိုပါက ပြည်သူလူထုရဲ့ ရွေးချယ်မှူ ဆုံးဖြတ်မှူ ပါဝင်လုပ်ဆောင်မှူတွေကို အလေးထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်မှာ အတွေးအခေါ် အသိအမြင်စွမ်းရည်မြင့်မားသူတွေရဲ့ အသိအမြင်တွေ စီမံခန့် ခွဲမှူတွေ ပိုပြီးအရေးပါပါမယ်။ မီးတောက်ကြီးတစ်ခုရဲ့ လောင်ကြွမ်းမှူနဲ့ အပူစွမ်းအင်များသည် ထင်းတစ်ချောင်းစီ၏ စုပေါင်းစွမ်းအားများမှထွက်ပေါ်လာတဲ့အပူစွမ်းအင်နဲ့ပမာမျှလှပါတယ် ။ ပင်လယ်တစ်ခုကို ရုတ်ချည်း ရေပြည့် တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ မိုးရေစက်များစွာနဲ့စုပေါင်းထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။လူတစ်ဦးခြင်းစီရဲ့ စီမံခံခွဲ တတ်မှူ တစ်ဦးခြင်းအရည်အသွေးက အလွန်အရေးပါလှပါတယ်။ အဓိကက ပညာရေးပါဘဲ။ ကျောင်းသင်ပညာရေး ကအခြေခံကောင်း ဖို့ လိုပါမယ်။ မိသားစုဘ၀ပျိုးထောင်မှူကအစောဆုံးဖြစ် ၍ မိဘတွေကအစ အမြော်အမြင်ရှိရပါမယ် ။ လူသားတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံရေးရိုက်ခတ်မှူနဲ့အသိမြင်ဖွံဖြိုးခွင် ရရှိကြပါတယ်။ ၀န်းကျင်၊ ရပ်ရွာ ၊ မြို့ ပြလူနေမှူအဖွဲအစည်းရဲ့ ဆက်ဆံရေးပုံသွင်းမှူတွေက အရေးကြီးလှပါတယ်။ မိသားစုအခြေအနေနဲ့ ကျောင်းသင်ပညာရေးမှ လွမ်းမိုးပြုပြင်မှူများက အားကစား အနုပညာ မျိုးချစ်စိတ် ဘာသာရေး ပရဟိတစိတ်ဓါတ် အချိန်ကိုအသုံးချတတ်မှူနဲ အလုပ်စီမံခန့် ခွဲနိုင်စွမ်း တွေက တစ်ဦးခြင်းစီရဲ့ ရွေးချယ်တန်ဖိုးထားမှူနဲ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေးများ (personality) အရ ကွဲပြားသွားကြပါတယ် ။လူတစ်ယောက် တော် ၏သင့် ၏ ကို " ဒီပုတ်ထဲကဒီပဲ " ဆိုတာမျိုးတော့ တရားသေပြောလိုမရပါဘူး ။ ချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းအား
လူခြင်းတူသော်လည်း အသက်ရှူပုံကွဲပြားခြင်းတွေရှိပါတယ်။သွေးသားရင်းခြာမောင်နှမတွေမှာ အကြိုက်စရိုက် မတူညီတာတွေက သာဓကဖြစ်ပါတယ် ။ကွဲပြားမှူတစ်ခုစီတော့ရှိကြပါတယ်။
ကောင်းတဲ့ လားရာကွဲပြားတူညီမှူတွေကို တူညီတဲ့ပဲ့ပင် မှူတစ်ခုအဖြစ်စာများများဖတ်ရပါမယ် ။ စာဖတ်ခြင်းအသိဥာဏ်ရှိနေသူမှာ ဘ၀ရဲ့ကြုံတွေရတတ်တဲ့ချောက်ကမ်းပါးတွေ လမ်းမှားတွေကို ကြိုတင်စီမံခန့် ခွဲရှောင်လွှဲ နိုင်ပါတယ်။
လမ်းကောင်းကိုကြိုဆနိုင်လို့ အချိန်ကိုအကျိုးရှိအောင် သုံးတတ်မယ် ။အဓိကနဲ့ သာမည ခွဲခြားတတ်လာမယ်။ (ခေတ်စကားတစ်ခု အယ်ဒီတာစကား။ ။ အရေးမကြီးတာကို အရေးကြီးသလိုလုပ်တယ်။)အလုပ်ရဲ့ထွက်လာ မယ့် ရလဒ် အကောင်းအဆိုး ကိုချင့်ချိန်နိုင်မယ် စာဖတ်သူများက စာမဖတ်တဲလူထက် သိသိသာသာခေါင်းတစ်လုံးစာမက ပိုမြင့်ပိုမြင်နိုင်ကြပါ တယ်။ စာဖတ်သော အယ်ဒီတာ
ဆိုဗီယက်ရုရှားခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးကြီးကို ခေါင်းဆောင်အောင်မြင်စေခဲ့တဲ့ ကွန်မြူနစ် ခေါင်းဆောင် “ ဗွီအိုင်လီနင်“ ဟာ သတင်းစာဆရာ ၊ ဂျာနယ်အယ်ဒီတာအဖြစ် စာအလွန်ဖတ် သူဖြစ်တယ် ။(အယ်ဒီတာဖြည့်စွက်။ ။အခုရှိသေးရင် ၀က်ဘ်အယ်ဒီတာ ပါဖြစ်ဦးမည်။)စာအလွန်ဖတ်ပြီး ဆောင်းပါးတွေ လဲ ရေးခဲ့ပါတယ် ။ စာဖတ်လွန်းတဲ့ လီနင် ဟာ အမြင်ကျယ်ပါတယ်။ စာဖတ်သော ရှေ့နေ အမေရိကန်သမ္မတပေါင်း (၄၅) ဦးလောက်ရှိတဲ့အနက်မှာ လင်ကင်း(သို)အေဗရာဟမ်လင်ကွန်း ကဘယ်သှူမယှဉ်သာအောင် လူသေသော်လည်း နာမည်မသေသူ လေးစားချစ်ခင်မြတ် နိုးဖွယ် ပုဂ္ဂိုလ် ထူးကြီးဖြစ်ပါသည် ။ လင်းကင်းရဲ့စာပေစာမျက်နှာများမှာကျောင်းတတ်ရက် တစ်နှစ်ခွဲတောင်မရှိဘဲကျောင်းစာလည်းကောင်းကောင်းမသင်ခဲ့ရရှာပါဘူး ။
ဒါပေမဲ့စာပေကို အလှမ်းမဝေးဘဲ ရသမျှလက်လှမ်းမှီသမျှ စာတွေကိုဖတ်မှတ်လေ့လာတယ် ။ ရှိတ်စပီယားနဲ့ အကျော်အမော်စာဆိုကြီးတွေရဲ့စာတွေနဲ့ ရင်းနှီးလှတဲ့ လင်ကင်းရဲ့မိန်ခွန်းတိုင်းက အဆီအသားပြည့်ဝလှပြီးပြည်သူ့ ဘ၀င်စွဲနေလို့ဒီနေ့့ဒီနေ့ အချိန်အထိ မေ့ မရတသသ ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ စာကြည့်တိုက်မှူးနယ်ချဲ့ ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာ ဖက်ဆစ် ဂျပန်တွေကို တော်လှန်ကြရပါတယ် ။ အဲ့ဒီအခါမှာ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ထဲကို ဟိန္ဒားသတ္တုမိုင်း အလုပ်သမားတစ်ယောက်ဟာ ယိုးဒယားမှ ရန်ကုန်သို့ တိုက်ခိုက်ချီတက်လာတဲ့ စစ်ကြောင်းမှာ ရဲဘော်အဖြစ် ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်လိုက်ပါလာခဲ့တယ် ။သူက ဟိန္ဒားသတ္တုတွင်း အလုပ်သမားစာကြည့်တိုက်မှာ " စာကြည့်တိုက်မှူးစေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်တယ်" ။ သူက အတန်းပညာ ရှစ်တန်း ၊ ကိုးတန်းသာ အောင်ပေမဲ့ စာဖတ်ဝါသနာထုံတော့ အလွန်စာဖတ်အားကောင်းတယ်။ ဘီအိုင်အေ ခေတ်မှာ သူဟာ ရာထူးအဆင့်ဆင့်တက်ပြီး အရာရှိဖြစ်လာတယ် ။ ဗိုလ်ဗထူးပေ့ါ ။ တိုက်ရည်ခိုက်ရည် ထူးထူးချွန်ချွန်ကောင်းတာကြောင့် တပ်ရင်းမှူးရာထူးပေးအပ်ခြင်းခံရတယ် ။ (ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်တွေတောင် တပ်ရင်းမှူးရာထူးမရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။) ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးမှာတော့ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းက ဗိုလ်မှူးကြီး ဗထူးကို မြောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူးအဖြစ် ကွပ်ကဲတိုက်ခိုက်စေပါတယ် ။ စာဖတ်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိူးနမူနာလေးပါ ။ ဗိုလ်မှူးကြီးဗထူးလို လူကောင်းလူတော်တွေ ဦးစီးကွပ်ကဲတော့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကြီး ဟာလည်း ပြည်သူတွေရဲ့ အားပေးကူညီမှုနဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေ တအံ့တသြ ဖြစ်ရလောက်အောင်အထိ ရာဇ၀င်စာတင်ခဲ့ရတာပဲပေ့ါ ။ စာဖတ်သောမြန်မာ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် သခင်အောင်ဆန်း (သို့ )ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ တိုက်ရေးခိုက်ရေး ရှေတန်းတင်ဦးစားပေးပြီး ၊ ရိုးရိုးသားသား ၊ အညာသားဆန်ပေမယ် တကယ့် သံတမာန်စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှူ ၊ ရှေ့ဆောင် လမ်းပြနိုင်မှူ ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တိကျ ပြတ်သားမှူနဲ့ မြင်ကြားတတ်သိလွယ်မှူတွေမှာ ယှဉ်သာသူမရှိလောက်အောင် ထင်ရှားလှပြီးယနေ တိုင်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ အမှတ်အသား ကိုယ်စားပြုဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ် ။ သခင်အောင်ဆန်းရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်အဖြစ် ဘုဆတ်ဆတ် ခပ်ပြတ်ပြတ် ပြောဆိုတတ် ပြီး ၊ မလိုအပ်လျှင် နှူတ်ဆိတ်နေတတ်သော အမူအကျင့် ရှိသော်လည်း ၊ ပြောရေးပြောသင့် ပြောခွင့်ကြုံတဲ့အခါ ထိထိရောက်ရောက် ၊ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိလှခြင်းက စာအလွန်ဖတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကဗျာနဲ့ ဝထ္တူ ၊ ဆောင်းပါးများကို လည်း ရေးသားနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ။ စာဖတ်သော ထောင်ထွက်မှအလှူရှင်ိ်
ပခုက္ကူဒေသမှထနောင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ရှားတောရွာနေငယ်အမည် တောခွေး (ခ) မောင်အုံးဖေ ရဲ့ဘ၀အစကနွမ်းပါးလှပြီး မြင်းထိန်း၊ကွမ်းယာသည်၊ဖောင်သမား ကျပန်းအလုပ်စုနဲ့ ဓားပြဖြစ်ပြီး ထောင်သုံးကြိမ်ကျဘူးခဲ့ပါတယ်။ ထောင်တွင်းမှ ဘ၀သစ် အတွေးသစ်တွေကိုစာပေမှားမှရယူပြီး မကောင်းမှူများစွန့်လို့ သူဌေး သူကြွယ် ကုန်သည် ပွဲစား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဘ၀မှတ်တမ်းများနဲ့ ပခုက္ကူဦးအုန်းဦးဖေဆို တဲ့ကလောင်တစ်ချောင်းလဲပိုင် ဆိုင်ခဲ့ပြီး စာပေရန်ပုံငွေ (၇၆-သန်း)ကျော် နဲ့ပညာရေးထူးချွန်ဆုရန်ပုံငွေ (၅၄-သိန်း) ကိုလည်း စာပေမျိုးစေ့ချလှူဒါန်းပြီးပရဟိတအောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ။ စာဖတ်သော အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အာရှကုလသမဂ္ဂခေါင်းဆောင် ပထမဦးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှ သက်တမ်းနှစ်ကြိမ်(၁၀-နှစ်) တိတိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဦးသန့် မှာပန်းတစ်နော်အမျိုးသားကျောင်းမှ ကျောင်းဆရာတစ်ဦးဖြစ် ပြီးစာအလွန်ဖတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံအားလုံးကကန့် ကွက်မဲမရှိ တညီတညွတ် တည်း ထောက်ခံရွေးချယ်ခန့် အပ်ခံရခြင်းက စာအရမ်းဖတ်လို့ ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်နေရာ ရောက်သွားခဲ့တာပါ ။ စာအလွန်ဖတ်သော ၀န်ဇင်းမင်းရာဇာ မြန်မာရာဇ၀င်များထဲမှ ဘုရင်စိတ်ကျေပ်သည် အတိအကျမှန်ကန်စွာဖြေကြားနိုင်ခဲ့လို့အင်းဝဘုရင် စွာစော်ကဲလက်ထက်မှ မင်းလေးဆက်တိုင်အောင် ရာထူးချီးမြှင့်ခံခဲ့ ရပါတယ် ။ဘိုးရာဇာလျှောက်ထုံးများကို ယနေ့ အထိ မှန်ကန်ဆဲ ကိုးကားနေရဆဲလဲဖြစ်ပါတယ် ။နန်းတော်မှာလည်း အမတ်ကြီးဘိုးရာဇာအဖြစ် ရာဇ၀င် ထင်ရှားနေရခြင်းများက စာဖတ်တဲ့ အကျိုးများဖြစ်ပါတယ် ။
ဆရာချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ)၏ အတွေးအမြင် နိဂုံး အဖြစ်စာဖတ်တဲ့ အကျင့် နေစဉ်ပြုလုပ်ပါ ။ အားကစားပဲ ဖတ်ဖတ် ၊ ဂျာနယ်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ၀ထ္တူဘဲ ကြိုက်ကြိုက် နှစ်သက်ရာစာအုပ်များ တန်းစီပြီးနေ့ စဉ်ဖတ်ပါ ။ စာဖတ်သက်ရင့်လာတာနဲ့ အညီ စာကောင်းပေကောင်း တွေကို ၊ စီစစ် ဖတ်တတ်လာပါမယ်။ စာဖတ်သူမှန်သမျှ ကြီးပွားတိုးတတ်ကြ မှာပါ ဘဲ ၊ ဘ၀ကို တန်ဖိုးရှိအောင် ဘ၀တန်ဖိုးမြှင့်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး စာဖတ်ကြမှဖြစ်ပါမယ် ။ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ........ဒါလေးကတော့ .. ဆရာချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ) ရဲ့ စာဖတ်ခြင်းအပေါ်ထားရှိတဲ့ အတွေးအမြင်လေးပါ ။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ရော ဘယ်လို စာဖတ်ကြမလဲ .. ?? ကျွန်တော်တို့ လို ကွန်ပျူတာသမားတွေ အတွက်ကတော့ အွန်လိုင်းမှာပဲ အများစု အနေနဲ့ စာဖတ်ကြရမှာပါ ။ အဲ့မှာ အကျိူးရှိသော စာများကိုသာ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ။ ညစ်ညမ်းစာပေများ ၊ ၀တ္ထုများလည်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အများအပြား ရှိတာကြောင့် အဲ့လို အကျိူးမရှိနိုင်တဲ့ စာမျိူးတွေ အတွက် မိမိ အချိန်တွေ ၊ ငွေတွေ ကုန်ကျသွားတာကို နှမြောသင့်ပါတယ် ။ဒါဆို.. ကျွန်တော်တို့ အခု စာအုပ်တွေ ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ ၊ ဂျာနယ်တွေနဲ့ စာဖတ်နေကြရပေမဲ့ .....နောင်အနာဂတ်မှာ ဘယ်လို စာဖတ်ကြမလဲ ?? ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာလေးကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ် ။ ( ဥပမာ - စာအုပ်တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေ ပျောက်ပျက်သွားပြီး E-Reader တွေနဲ့ ပဲ အလုပ်လုပ်ကြတော့မှာလား စသဖြင့်ပေ့ါ... )"ပညာရဲရင့် ပွဲလယ်တင့်" ဆိုသလို စာများများဖတ်တဲ့ သူက မဖတ်တဲ့သူထက် ခေါင်းတစ်လုံးစာမျှ ပိုမြင့်ပြီး ပိုမြင်နိုင်စွမ်း ရှိတာကြောင့် ... မိမိတို့ ရဲ့ တန်ဖိုးရှိလွန်း လှတဲ့ ငွေပေးပြီး ၀ယ်လို့ မရတဲ့ အားလပ်ချိန်လေးတွေမှာ မိမိအတွက် အကျိူးရှိစေမဲ့ ... စာများကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် ....... အချိန်ကို တန်ဖိုး ရှိရှိ အသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်.....။
မင်းကိုသိပ်ချစ်တာပေါ့...ငါ့ရင်ခွင် ပူနေခဲ့ရင်တောင်မအမြဲအတိတ်မှာပဲနေသွားမှာပါ.။ငါတို့ဆုံခဲ့ဖူးတဲ့ ညတွေ ခုတော့ ကြယ်ရောင်တွေ မှိတ်တုတ်လို့တိတ်ဆိတ်စွာ ငိုနေပြီလေ။ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတွေ လေယူရာတိမ်း ယိမ်းကုန်ခဲ့ပြီး....။ငါ့ကို ညစဉ် စောင့်ရှောက်မယ့်အဖော် မွေးပွရုပ်လေး ရင်ဝယ်ပိုက်လို့ ပေါ့......။နင့်နားမရှိစေချင်တဲ့ ငါ...နင့်ရဲ့ဝေးရာကို ဦးတည်ချက်မဲ့ ပြေးပြီနော်.....။ခိုင်ခံတဲ့ လက်တစ်စုံက..............နင်ပဲဖေးမခဲ့တယ်နင်ပျော်၇ွှင်စေချင်တယ်လို့.............နင်ပဲပြောခဲ့တယ်နင်ကတခြာသူတစ်ယောက်ကို..............နင်ပြောတဲ့စကားနင် ပျော်ရွှင်စေချင်တဲ့ ငါ..တမင်တိမ်းရှောင်မညှာမတာပြုသူရယ်စာနာမှုတော့ထားသင့်ပါတယ်.။နင် မပြောချင်တဲ့ ငါ့ဖုန်းလေးကို နင်နဲ့စကားပြောခွင့် မပေးတော့ဘူးနင်မမြင်ချင်တဲ့ ငါ့ကို မမြင်စေရဘူး......။နင့်မကြားချင်တဲ့ ငါ့စကားသံတွေ နင် မကြားစေရတော့ဘူး........။နင် မပိုင်ဆိုင်စေချင်တဲ့ ခြောက်သွေ့ မှုကမ္ဘာမှာ ပြန်လည်ခိုဝင်လို့တစ်ကိုယ်ထဲညတွေကို ငါတစ်ယောက်ထဲသာ ဖြတ်သန်းပါတော့မယ်..။ငါ.......... ငါဆိုတဲ့ ငါ့ကိုယ်ငါကို သေချာ ပြန်မေးကြည့်ခဲ့တယ်.....။နင့်ရဲ့အဝေးမှာ နေနိုင်သလား...။ ဟင်အင်း..........ငါ့ကိုယ်ငါ မသေချာခဲ့ဘူး...။ ဒါပေမဲ့ သေချာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ငါ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ချလိုက်တယ်...။ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့မင်းနှလုံးသား ကိုအသိမကြွယ်လူတွေလယ်မှာမင်းကိုမို့အနိုင်ကျင့်ဆိုးနွဲချင်တဲ့ငါ့စိတ်ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့မင်းနှလုံးသား ကိုမြင်အောင်မကြည့်တတ်ခဲ့တာငါ့အမှားလား.ကျောခိုင်းလှည့်ထွက် မင်းထားရက်ရင်နေခဲ့ယုံသာ တတ်နိုင်ပါသည်အပြစ်မမြင် ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည်ငါသည်ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့ချစ်သူကို...........။ ။မိုးငယ်အောင်
မိမိတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ခွဲမည်ဆိုလျှင်လေးမျိုးခွဲနှိုင်သည်။ မူကြိုဗုဒ္ဓဘာသာ၊မူလတန်းဗုဒ္ဓဘာသာ၊အလယ်တန်းဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အထက်တန်းဗုဒ္ဓဘာသာဟူ၍ ဖြစ်ည်။
မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာ၊ သဒ္ဓါဗုဒ္ဓဘာသာ၊ယုံကြည်မှု့ ကိုကွယ်မှု့ တွေရောနေသော အုတ်အရောရော၊ကျောက်အရောရော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် မူကြိုဗုဒ္ဓဘာသာများ ဖြစ်သည်။ဂါထာတွေ၊ မန္တာန်တွေ၊ ယတြာတွေ၊ ဓာတ်တွေ၊ နတ်တွေ၊ ဘိုးတော်မယ်တော်တွေ၊ ရောနှောနေသော ဗုဒ္ဓဘာသာသည် မူကြိုဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်သည်။ မူကြိုဗုဒ္ဓဘာသာသည် လေယူရာယိမ်းတတ်သည်။သူတို့ အသိအမြင်ကမှုန်ဝါးဝါး၊ ဝေဝါးဝါးသညဖြစ်သည်။ အာဟာရချို့ တဲ့သောကလေးကဲ့သို့ဗုဒ္ဓဘာသာအသိအမြင်အာဟာရချို့ တဲ့နေသူများဖြစ်ကြသည်။
မူလတန်းဗုဒ္ဓဘာသာသည် ကိုးကွယ်ရာသုံးမျိုး၊ ယုံကြည်ရာခြောက်မျိုး၊ အားကိုးရာလေးမျိုး၊ လုပ်ဆောင်စရာကျင့်ဝတ်သုံးမျိုး ရှိသည်။ကိုးကွယ်ရာသုံးမျိုးကား ဘုရား၊တရား၊ သံဃာဖြစ်သည်။ဘုရားတရားသံဃာမှတပါး အခြားကိုးကွယ်လျှင် သရဏဂုံညှိုးနွမ်းသည်။သရဏဂုံညစ်နွမ်းသည်။ရတနာသုံးပါးထက် အခြားတဖက်ကို အားသာသွားလျှင် သရဏဂုံပျက်သည်။မူလတန်းဗုဒ္ဓဘာသာတို့ ယုံကြည်ရမည့် ခြောက်မျိုးကား ဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊ ကုသိုလ်ကံနှင့် အကုသိုလ်ကံ၊ ကုသိုလ်ကံ၏ကောင်းကျိုး၊အကုသိုလ်ကံ၏ဆိုးကျိုး၊ရှေ့ ဘဝ နောက်ဘဝ သံသရာဖြစ်သည်။ထိုခြောက်မျိုးမှတပါး မခြားယုံကြည်ဖွယ်ရာမရှိ၊ဗေဒင်လဲ သူ့ ဟာနဲ့ သူ မှန်ချင်မှန်မည်၊ယတြာလဲ သူ့ ဟာနှင့်သူ မှန်ချင်မှန်မည်။ ယုံချင်လျှင်ယုံလို့ ရပါသည်။သို့ သော် ကံ ကံ၏အကျိုးနှင့်တော့ မရောလေနှင့်၊လောကီသားသည် လောကီကိစ္စနှင့် ကင်းနိုင်မည်မဟုတ်၊လောကီသားသည်လောကီကိစ္စကိုအလေးထားသဖြင့် လောကီကိစ္စကိုသာ စိတ်ဝင်စားသည်။ ထို့ ကြောင့်လောကီကိစ္စတွေကို လုံးဝမပြစ်ပယ်လို။ သို့ သော်ဘာသာရေးနှင့်တော့ မရောလေနှင့်။ အထွတ်အမြတ်ကတော့ ရတနာသုံးပါးရှိသည်။ ရတနာသုံးပါးကိုတော့ ဘယ်အရာကမှကျော်လို့ မရ၊ ဘယ်သူမှကျော်လို့ မရ။မူလတန်းဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အားကိုးစရာလေးမျိုးရှိသည်။ ထိုလေးမျိုးက ကံ၊ ဉာဏ်၊ ဝီရိယ၊ပယောဂတို့ ဖြစ်သည်။ ဘုရားဟောသည့် အတ္တာဟိ အတ္တာနော နာထော-မိမိသည်သာကိုးကွယ်ရာဆိုတာ ဒါပဲဖြစ်သည်။ထိုလေးမျိုးသည်သာ မိမိ၏ အားကိုးရာအစစ်ဖြစ်သည်။ကံကောင်းရမည်၊ဉာဏ်ကောင်းရမည်၊ဝီရိယကောင်းရမည်၊ ပယောဂဟူသည် မိမိ၏လုပ်တတ်၊ကိုင်တတ်၊ပြောတတ်၊ဆိုတတ် ဆိုသည့်အရည်အချင်းဖြစ်သည်။ ခောတ်ပညာတွေတတ်ထားခြင်းသည် ပယောဂကောင်းဖို့ အထောက်အကူဖြစ်သည်။ ပညာအဆင့်မြင့်သလောက်ပယောဂလည်း အဆင့်မြင့်သည်၊ဆိုက်ကားနင်း၊ကားမောင်း၊ဈေးရောင်းကစပြီး မိမိတတ်ကျွမ်းသလောက် မိမိပယောဂကောင်းသည်။ကံက အတိတ်ကံနှင့်လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ကံ နှစ်မျိုးရှိသည်။ ပစ္စုပ္ပန်ကံဆိုတာ အလုပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ပယောဂဆိုသည့် ပညာကောင်းကောင်းတတ်ထားလေ အလုပ်ကောင်းလေဖြစ်သည်။အလုပ်ကောင်းလေကံကောင်းလေဖြစ်သည်။ အလုပ်ကလည်းကောင်းရမည်။ ကိုယ်လုပ်သည့်အလုပ်ကိုလည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံးစိတ်စေတနာနှင့်လုပ်ရမည်။ အကောင်းဆုံးအစွမ်းအစကို ထုတ်ဖော်အသုံးပြုလုပ်ကိုင်ရမည်။ အလုပ်ကံကိုထားလိုက်တော့၊ပစ္စုပ္ပန်ကိုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ရမည်။ဉာဏ်ကောင်းဖို့ အတွက် ပညာဗဟုသုတလိုသည်။ပညာဗဟုသုတလေ့လာလိုက်စားရမည်။သိချင်စိတ်တတ်ချင်စိတ်ရှိရမည်။ သိအောင်တတ်အောင် ဆည်းပူးအားထုတ်ရမည်၊များများမေးရမည်၊ အမေးအမြန်းထူရမည်။ စာများများဖတ်ရမည်၊ စာဆိုလျှင်တွေ့ သမျှစာ အကုန်ဖတ်သင့်သည်၊ ဉာဏ်ဆိုတာ တကယ်ဓမ္မသဘောဆောင်သည့် ဉာဏ်မဟုတ်၊ လောကီရေးရာ နှံ့ နှံ့ စပ်စပ် သိသော ဉာဏ်ကိုသာဆိုလိုသည်။ ခေတ်ပြောပြောရလျှင် ခေါင်းကောင်းရမည်၊ဦးနှောက်ကောင်းရမည်။ ထို့ အတွက် စာပေဗဟုသုတ လေ့လာလိုက်စားရမည်။မူလတန်းဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ကျင့်စဉ်သုံးမျိုးသာရှိသည်။ ဒါနပြုရမည်၊ ဥပုသ်သီတင်းဆောက်တည်ရမည်၊တရားဘာဝနာ အားထုတ်ရမည်။ ဒါနပြုတာကလောဘနည်းဖို့ ၊မေတ္တာအားကောင်းဖို့ ၊ ဥပုသ်သီတင်းဆောက်တည်တာက ဒေါသနည်းဖို့ ၊ကရုဏာအားကောင်းဖို့ ၊ ဘာဝနာအလုပ်အားထုတ်တာက မောဟနည်းဖို့ ၊ပညာအားကောင်းဖို့ ၊ခြုံလိုက်လျှင်တော့ ဒါနသီလဘာဝနာသုံးခုလုံးက လောဘဒေါသမောဟတွေ နည်းပါးဖို့ ၊ခေါင်းပါးဖို့ ၊ကုန်ခမ်းဖို့ သာဖြစ်သည်။ဒါနပြုပါရဲ ၊သီလစောင့်ပါရဲ့ ၊ဘာဝနာပွားပါရဲ့ ၊ထိုဒါနသီလဘာဝနာတွေက လောဘဒေါသမောဟ ပွားကြောင်းတွေဖြစ်နေလျှင် ထိုကျင့်စဉ်ကရောနေပြီ၊ ထိုကျင့်စဉ်ကရှုပ်နေပြီ၊ ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်တယ်ဆိုတာ ထိုကျင့်စဉ်တွေဖြစ်သည်။ ဘယ်ဘုရားဆုတောင်းပြည့်သည်၊ဘယ်ဘုရား အိမ်ပင့်လျှင် လာဘ်ပွင့်သည်၊ ဘယ်ဘုရား ဘယ်လိုအဓိဌာန်ဝင်လျှင် ဘာတွေအဆင်ပြေမည်၊ ဘယ်အဓိဌာန်ပုတီး ဘယ်လိုစိပ်လျှင် ဘာတွေကောင်းသည်၊ ထီပေါက်မည်၊လာဘ်ဝင်မည်၊ ရာထူးတက်မည်၊ ဈေးရောင်းကောင်းမည်၊ အိမ်ရောင်းထွက်မည်၊ အကြွေးကြေမည်၊ အကြွေးပြန်တောင်းရမည်၊ စသည်ဖြင့်မက်လုံးတွေပါလာလျှင် ဘာသာရေးက လမ်းချော်သွားပြီ၊ အုတ်ရောရော၊ကျောက်ရောရောဖြစ်သွားပြီ၊ ထိုတောင်ကို မကျော်နိုင်လျှင် မူကြိုကမတက်သေး။
မူလတန်းဗုဒ္ဓဘာသာက ကမ္မဿကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိနှင့် ပြည့်စုံရသည်၊ ကံသာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်သည်ဟု ကံကိုသာ အဓိကထားလက်ခံယုံကြည်ရသည်။ အလယ်တန်းဗုဒ္ဓဘာသာက ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိနှင့်ပြည့်စုံရသည်။ တရားထိုင်ရမည်၊တရားမှတ်ရမည်၊ရုပ်သဘော၊ နာမ်သဘော၊ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တသဘောတို့ ကို သိမြင်နိုင်သောဉာဏ်ရရှိအောင် ပွားများအားထုတ်ရမည်။
အထက်တန်းဗုဒ္ဓဘာသာဟူသည် မဂ္ဂသမ္မာဒိဋ္ဌိနှင့်ပြည့်စုံလို့သစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်သော အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည်။ ဝိပဿနာတရားကို ကြိုးစားအားထုတ်လို့ ဝိပဿနာဉာဏ်တွေ ပြည့်စုံသောအခါ မဂ်ဉာဏ်သို့ ကူးသွားသည်။မဂ်ဉာဏ်ကိုရသောအခါသစ္စာလေးပါးကိုမြင်တော့သည်။ ထိုအခါဗုဒ္ဓဘာသာပန်းတိုင်ကို ရောက်တော့သည်။
အောက်တန်းမူလဗုဒ္ဓဘာသာ၊ကံကိုယ်ပိုင်ရှိ မြင်သိသေချာ၊အလယ်ထင်လင်း မြင်ရှင်းလက္ခဏာ၊အထက်တန်းလေးခန်း မြင်သစ္စာ။
လောကကျက်သရေထဲမှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ကျက်သရေက “အသိတရား”ဖြစ်ပါတယ်၊ အသိအလိမ္မာ၊ ဉာဏ်ပညာ၊ ၀ိဇ္ဇာ အမောဟ ဆိုတဲ့ အမည်များဟာ အဓိပ္ပါယ်တူတွေပါ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ လမ်းစဉ်မှာတော့ “သမ္မာဒိဋ္ဌိ”လို့ သုံးပါတယ်။ သံသယကင်း အမြင်ရှင်းတဲ့ အသိတရားလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ဒီအသိနဲ့ ပတ်သက်လို့ လောကီနယ်ပယ်မှာ သင်ယူမှတ်သားလို့ မဆုံးနိုင်အောင် အကန့်အသတ်မရှိ ကျယ်ဝန်းတယ်ဆိုတာ လူတိုင်း သိကြပြီးသားပါ၊ ဓမ္မနယ်ပယ်မှာတော့ အခြေခံအားဖြင့် အဆင့်သုံးဆင့်ရှိပါတယ်။(၁) ကံနဲ့ ကံရဲ့ အကျိုးကို သံသယကင်းကင်း သိမြင်တဲ့ အဆင့် (ကမ္မဿကတသမ္မာဒိဋ္ဌိ) ။(၂) ရုပ်နာမ်ဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့ ဖြစ်တတ် ပျက်တတ်တဲ့ သဘော အမှန်ကို သံသယကင်းကင်း သိမြင်တဲ့ အဆင့်( ၀ိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိ)နဲ့(၃) ဖြစ်ပျက်ရှုတ်ထွေး ဒုက္ခဘေးတို့ ငြိမ်းအေးလွတ်မြောက်ရာ နိဗ္ဗာန်ကို ထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ အဆင့်(မဂ္ဂသမ္မာဒိဋ္ဌိ) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လောကီပညာရေးမှာ မူလတန်းအဆင့်ကို အောက်သက် ကျေကျေနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့မှ အလယ်တန်းအဆင့် အထက်တန်းအဆင့်တွေကို တစ်ဆင့်ထက် တစ်ဆင့် အထောက်အကူပြုပြီး လွယ်ကူအောင်မြင်နိုင်သလိုပဲ၊ ဓမ္မအသိမှာလဲ မူလတန်း အဆင့်ဖြစ်တဲ့ ကမ္မဿကတသမ္မာဒိဋ္ဌိအဆင့်မှာ အောက်သက်ကျေပြီး သံသယကင်းကင်းသိမြင်မှသာ အထက်အဆင့်တွေကို ကျေးဇူးပြုသိမြင်နိုင်ကြ မှာပါ၊ အောက်သက်မကျေဘဲ အထက်အဆင့်တွေကို ဖြတ်လမ်းကနေ တက်ဖို့ ဆိုတာ အများစု အတွက် ဖြစ်နိုင်ချေ အတော်နည်းပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ကံနဲ့ ကံရဲ့ အကျိုးကို သံသယကင်းကင်း အမြင်ရှင်းရေးဟာ ဓမ္မနယ်ပယ်မှာ မရှိ မဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအသိ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုရတာပါ။အခြေခံအသိဖြစ်တဲ့ “ ကောင်းတာလုပ်ရင် ကျောင်းကျိုး ဖြစ်တယ်၊ မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းကျိုး ဖြစ်တယ်”ဆိုတဲ့ အသိတရားဟာ အပြော လွယ် သလောက် တကယ် သဘောပေါက်လက်ခံရေးမှာ အလွန်ခက်ခဲနေ ကြပါတယ်။ ဟောပြော ပို့ချခဲ့တဲ့ ပွဲတွေမှာ မေးကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။“ထမင်းစားရင် အားဖြစ်တယ်၊ ကုသိုလ်ပြုရင် ကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်” ဒီနှစ်မျိုးမှာ ထမင်းစားတာက တစ်ဘ၀ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက်ရေးအတွက် အရေးပါတဲ့ ကောင်းမှုဖြစ်ပြီး ကုသိုလ်ဆိုတာ ဓမ္မခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ရေး အတွက် အရေးပါတဲ့ ကောင်းမှုဖြစ်တယ်၊ ဒီနှစ်ခုမှာ ဘယ်ဟာက ပိုအရေးကြီး သလဲဆိုတော့ အားလုံးကပဲ“ ကုသိုလ်တရားက အရေးကြီးပါတယ်”တဲ့၊ ဒါဖြင့် တစ်နေ့မှာ ထမင်းဘယ်နှစ်ထပ် စားသလဲဆိုတော့ အနဲဆုံး နှစ်ထပ်တဲ့၊ ကုသိုလ် ကိုကျတော့ကောဆိုတော့ “အဟဲ”ဆိုပြီး ငြိမ်သွားကြတယ်၊ အစားကို မစားဘဲ မနေနိုင်ကြသလို ကုသိုလ်ကို မပြုဘဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူ ဘယ်နှစ်ယေက်ပါ သလဲလို့ မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ အားလုံး အသံမထွက်ကြတော့ဘူး။ကဲ…… နောက်ထပ် စကားတစ်စုံ မေးကြည့်ပါဦးမယ်။“အဆိပ်သောက်ရင် သေတတ်တယ်၊ အကုသိုလ်ပြုရင် မကောင်းကျိုး(ဒုက္ခ)ခံစား ရတယ်” ဒီစကာဒးတစ်စုံမှာ အဆိပ်သောက်တာက တစ်ဘ၀ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပျက်စီးစေတဲ့ မကောင်းမှု၊ အကိုလ်ပြုတာက ဓမ္မခန္ဓာကိုယ်ကို ပျက်စီးစေတဲ့ မကောင်းမှု၊ တစ်နည်းပြောရရင်တော့ အဆိပ်က တစ်ဘ၀ခန္ဓကိုယ်ကို သေစေ တတ်တယ်၊ အကုသိုလ်က ဘ၀သံသရာ အဆက်ဆက်မှာ အသေမရပ် တရစပ် သေစေတတ်တယ်၊ ဘယ်အဆိပ်ကပိုပြင်းလဲ” ဆိုတော့ “အကုသိုလ် အဆိပ်က ပိုပြင်းပါတယ်”တဲ့၊“ပုထုဇဉ်အလျောက် မကင်းရာ မကင်းကြောင်းပေါ့” ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေနဲ့ အဆိပ်ကို တစ်ခွက်တစ်ဖလား မော့ကြည့်ဖူးသူ ရှိလားဆိုတော့“မရှိပါဘူး”တဲ့၊ ဒါဖြင့် အကုသိုလ်ကျတော့ကောဆိုတော့ အားလုံးငြိမ်နေကြတယ်၊ ဒီကြားထဲမှာ ဖြုန်းကနဲ ခြင်ရိုက်တဲ့ အသံတစ်သံပဲ ကြားလိုက်ရပါတယ်။အေး…. လူတွေ ဒုက္ခတွေနဲ့နချည်း လုံးထွေးနေရပြီး နိဗ္ဗာန်နဲ့ ဝေးနေ ကြတာဟာ ပါရမီတွေ ဘာတွေကို ဆင်ခြေအေပးမနေကြပါနဲ့ တကယ့် အခြေခံ အကြောင်းရင်းက အကုသိုလ်ကံကို အဆိပ်လောက် မကြောက်ကြသလို ကုသိုလ်ကံကိုလဲ ထမင်းလောက် အလေးမထားလို့ပါ”လို့ပဲ မှတ်ချက်ပေးခဲ့လိုက် ပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့အသိ အသိဆိုတာကို တချို့က မှန်ကန်တဲ့ အယူဝါဒ လို့ နားလည်မှု မှားနေတတ်ကြသလို “ ကုသိုလ်”ဆိုတာကိုလဲ ဘာသာဝါဒတစ်ခုခုရဲ့ မူပိုင်လုပ်ငန်း တစ်ခုလို့ အထင်မှားနေကြတာကိုလဲ မကြာခဏ တွေ့ရတတ် ပါတယ်။အမှန်က ကံနဲ့ ကံရဲ့အကျိုးကို သိတဲ့ အသိဆိုတာ ကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ် ကို လုပ်ရင် ကောင်းကျိုးဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အသိမှန်ကို ဆိုတာပါ၊ ဒီလို ကောင်း ကျိုး ဖြစ်စေတဲ့ အလုပ်ကို ဘယ်ဘာသာဝင်က လုပ်မှသာ ကောင်းတဲ့ အလုပ်ဖြစ်လို့ မူပိုင်လုပ်ထားလို့မရပါဘူး၊ မိရိုးဖလာ ကိုးကွယ်တဲ့ အယူဝါဒ အရ ဘယ် ဘာသာဝင်ပဲ ဖြစ်နေပါစေ ကောင်းတဲ့ စိတ်ထားနဲ့ သူတစ်ပါးကို ကောင်းကျိုးပြုတဲ့ အလုပ်မျိုးကို လုပ်နေတာဟာ ကောင်းမှုပါပဲ၊ ဒါကို ဗုဒ္ဓဘာသာ အရင့်အမာကြီး များလို့ ပြောကြသူများ ကိုယ်တိုင်ကတောင် သဘောမပေါက်နိုင် ကြတာတွေ တွေ့ရဖူးပါတယ်၊ “သရဏဂုံ မဆောက်တည်ပဲ ပြုလုပ်တာဟာ ကုသိုလ်ဖြစ်ပါ့ မလား”တဲ့၊ ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျာဒးကို” ကဲ.. ဝေဿန္တရာမင်းကြီးရဲ့ ဆင်ဖြူတော် အလှူတို့ သားတော် သမီးတော်တို့ကို လှူတဲ့ အလှူတို့ဟာ ကုသိုလ်ဖြစ်သလား မဖြစ်ဘူးလား ဆိုတော့ “ဖြစ်ပါတယ်”တဲ့၊ ဝေဿန္တရာ မင်းကြီးဟာ ဘယ်ဘာသာ လဲဆိုတဲ့ အခါကျတော့ အင်း…အဲ ဖြစ်ကုန်ကြရော။အမှန်က… အလောင်းတော်တို့ ပါရမီဖြည့်စဉ် ကာလတွေထဲမှာ သာသနာ ပ ကာလကြီးက အရှည်ဆုံး အများဆုံးပါ၊ ဒီကာလတွေမှာ အလောင်းတော် များ ဟာ ဘယ်ဘာသာဝင်မှ မဟုတ်သလို ဘယ်ဘာသာရေး အလုပ်မှလဲ လုပ်မနေ ကြပါဘူး၊ သူတစ်ပါးတို့ရဲ့ ကောင်းကျိုးကို စိတ်ကောင်း ထားပြီး လုပ်ဆောင် နေတာသက်သက်ပါ၊ ဒီလို လုပ်နေတာကိုပဲ ပါရမီကုသိုလ် အလုပ်လို့ ဆိုရတာပါ။အခုလောလောဆယ် နာဂစ်အလွန်ရက်ပိုင်း အတွင်းမှာပဲ နာဂစ်ဒဏ်ခံ ဒုက္ခသည်တွေကို နိုင်ငံအသီးသီး အရပ်ဒေသ အသီးသီးက ဘာသာဝင်တွေ အားလုံး စာနာစိတ်နဲ့ ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြတာတွေ၊ အလွန်ဝေးလံတဲ့ အရပ်တွေမှာ နေကြပြီး ဘာလူမျိုး ဘယ်ဘာသာဝင်မှန်း မသိကြပေမယ့် မေတ္တာနဲ့ ယှဉ်တဲ့ စာနာစိတ် ကြင်နာစိတ်အပြည့်နဲ့ ထောက်ပံ ကူညီကြတာတွေ၊ လူကိုယ်တိုင် လာရောက် အားပေးကြတာတွေ ကြည့်ပေါ့၊ ဘယ်ဘာသာဝင် တွေကတော့ ကုသိုလ်မရနိုင်ဘူးလို့ ကန့်သတ်လို့မရပါဘူး၊ အားလုံးဟာ စိတ်ကောင်းနဲံယှဉ် ပြီးဒုက္ခရောက်သူတို့ရဲ့ ကောင်းကျိုးကို ဆောင်ရွတ်ကြ သူများဖြစ်လို့ ကောင်းမှုရှင် စစ်စစ်တွေ ချည်းပါပဲ။“ကုသိုလ်ကောင်းမှု”ဆိုတာကိုက အများကောင်းကျိုး အတွက် စိတ် ကောင်း စေတနာကောင်းထားပြီး အကောင်းဆုံး လုပ်ဆော်ငတဲ့ အလုပ်ကို ဆိုတာပါ၊ ဘာသာဝင် အသီးသီးတို့ရဲ့ ဘာသာရေးအလုပ်ကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်သလို ဘယ်ဘာသာဝင်ကမှ သီးသန့်ပိုင်တဲ့ အလုပ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာ အမြင်ကျယ်ကျယ် အသိကြီးကြီးနဲ့ သဘောပေါက် ကြဖို့ လိုပါတယ်။“စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်း”ဆိုတာ ဘယ်လို စိတ်ထားမျိုးလဲ ဆိုတာကိုလည်း အားလုံးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သဘောပေါက်ဖို့ လိုပါတယ်၊ အတိုချုပ်ကတော့ ဗြဟ္မစိုရ် စိတ်ထားလို့ လူသိများကြတဲ့ မိမိနဲ့ သူတစ်ပါးကို တစ်သားတည်း ခံယူတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ ဆင်းရဲချမ်းသာကို မျှဝေ ခံစား တတ်တဲ့ မေတ္တာစိတ်၊ ဒုက္ခရောက် သူကို စာနာ ထောက်ထား ရိုင်းပင်း ကူညီ တတ်တဲ့ ကရုဏာစိတ်၊ ချမ်းသာပြည့်စုံသူတို့အပေါ်မှာ မနာလို ၀န်တိုမဖြစ်ဘဲ ကိုယ်တိုင် ချမ်းသာခံစားရသလို ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်တတ်တဲ့ မုဒိတာ စိတ်နဲ့ သူတစ်ပါးရဲ့ အပြစ်နဲ့ ချွတ်ယွင်းချက်များကို ခွင့်လွှကတ် လစ်လျူရှုတတ်တဲ့ ဥပေက္ခာစိတ်များကို စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်းလို့ ဆိုတာပါ။ဒီစိတ်ထား လေးမျိုးထဲမှာ ပဓာနအကျဆုံးက[B] “ကိုယ်နှင့်လည်းစာ၊ သတ္တ၀ါကို၊ ကြင်နာလှစေ၊ သူ့အသက်ကိုချစ်ပါလေ[/B]”ဆိုတဲ့ အရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ ရဲ့ ဆုံးမစာအတိုင်းကိုယ်ချင်းစာနာတတ်တဲ့ မေတ္တာစိတ်ထား ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ စိတ်ထားလေးမျိုးလုံးကို “မေတ္တာစိတ်ထား”ဆိုတာနဲ့ ကိုယ်စားပြု သုံးစွဲကြပါတယ်၊ “စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာစိတ်ထားစ”ဆိုတာ ဗြဟ္မစိုရ် စိတ်ထား လေးမျိုးလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ စိတ်ထားဖြစ်တယ်လို့ နားလည်ကြရမှာ ပါ။တိပိဋကဓရ(ယော)ဆရာတော် ဘုရားကြီးကတော့….[B]ဘာသာအားလုံး ရွှင်ပြုံးကြည်သာ ပေါင်းဆုံရာ၊ မေတ္တာအလှဆုံး။[/B][B] လူမျိုးအားလုံး ရွှင်ပြုံးကြည်သာ ပေါင်းဆုံရာ၊ မေတ္တာအလှဆုံး။[/B][B] သတ္တ၀ါအားလုံး ရွှင်ပြုါံ်ကြည်သာ ပေါင်းဆုံရာ၊ မေတ္တာအလှဆုံး။[/B] လို့ မိန့်ကြားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ် သိပ်မကြာလှသေးတဲ့(၂.၅.၂၀၀၈)နေ့ဆီက နာဂစ်ဆိုတဲ့ မုန်တိုင်းဆိုးကြီး အောက်မြန်မာပြည်ကို ၀င်ရောက်နှိပ်စက်လိုက်တာ ဧရာဝတီ တိုင်းနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက မြို့ကြီးမြို့ငယ်နဲ့ ကျေးရွာတွေပါ မကျန် အသက် အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေ အများကြီး ဆုံးရှုံကြရတဲ့အခါ ချမ်းသာနဲ့ ဆင်းရဲကို ဝေမျှ ခံစားတတ်တဲ့ လူသားတိုရဲ့ စိတ်ဓာတ်မှန် မေတ္တာစိတ်ထားဟာ နိုင်ငံ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဒေသဆိုတဲ့ အတားအဆီးအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေါင်းဆုံမိကြပါတယ်၊ဒီစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ပဲ တစ်ခါမှ မတွေ့မမြင်ဘူးကြသူတွေ ဖြစ်ပေမယ့် ဒုက္ခသည် အားလုံးကို ကိုယ့်မိသားစုလို သဘောထားပြီး ဝေးလံသီခေါင်တဲ့ အရပ်ဒေသတွေကအထိ ဒီဒုက္ခသည်နယ်မြေကို ပစ္စည်းဥစ္စာများသာမက လူကိုယ်တိုင်ပါ လာရောက် ကူညီကြတာပါ၊ သဘာဝဘေးဒဏ်က ကျက်သရေ အမဲ့ဆုံး ဖြစ်အောင် နှိပ်စက်ချိန်မှာ လူသားတို့ရဲ့ အမြင့်မားဆုံးနဲ့ အလှဆုံး ကျက်သရေ တွေ ပေါင်းဆုံပြကြတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ကျက်သရေဆုံမှတ်မှာ ဘာသာအားလုံး၊ လူမျိုးအားလုံးတို့ စုရုံးပေါင်းဆုံမိ ကြချိန်မှာ ထက်ထက်သန်သန်မပါဝင်ဘဲ ရှောင်လွှဲ နှောင့်နှေးနြေ့သူတို့အတွက် တော့ လယ်တီ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ သတိပေးဆုံးမ စကားအတိုင်း….[B]ခွင့်သာတုန်းမှ၊ မရုန်းချင်လျှင်၊ အရှုံးနှင့်ပြင် ရှိသေးးလိမ့်လား။[/B][B] ခွင့်သာခိုက်မှ ၊ မလိုက်ချင်လျှင်၊ အမိုက်နှင့်ပြင် ရှိသေးလိမ့်လား။[/B][B] ခွင်သာဆဲမှ၊ မနွဲချင်လျှင်၊ အလွှဲနှင့်ပြင် ရှိသေးလိမ့်လား…[/B]. လို့သာ ဆိုရပါ လိမ့်မယ်။ကျက်သရေမဲ့ခြင်းဘေးမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။
ခရစ်တော် (သို့မဟုတ်) ဦးဇီဝကိရိဋ
*** မသေမီက ပြုသင့်ကြ *** (ဓမ္မသီတဂူဆရာမောင်)
Beauty That’s More Than Skin Deep (Tha Nat Khar)
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို လျစ်လျူရှူသင့်ရှ...
ပါရမီဖြည့်ဖက် ဆိုသူ ဖျက်လို့ ပျက်ခဲ့ကြသည် များပါရမ...
" သင်္ခါရ ဘာဇနီ " ကျမ်း ဘ၀နာအကြောင်း (၁) (ဖူးဇွဲကပင...
၉နှစ်သား ခလေးက ပေးသွားတဲ့ သင်ခန်းစာ (သို့) မြန်မာလ...
“ကျွန်တော် အလွယ်တကူ တုန်လှုပ်လေ့ မရှိဘူး၊ စိတ်မလှုပ်...
What are you going to do before you die? (1)
သေချိန်နီးမှာ ထင်လာတဲ့ နိမိတ် (၃) မျိုး
စကားပရိယာယ် by အရှင်ကောဝိဒ (ယော)
အစာတစ်ခု နှင့် အသက်တစ်ချောင်း
စာဖတ်ခြင်းကို တန်ဖိုးထားလေးစားသော ဆရာချစ်နိုင်(စိတ...